အထာပေးနမှေတော့ – My Blog
ကြျောဌေးနှငျ့ သီတာတို့ လငျမယားမှာ အရငျကလို တကကျြကကျြ စကားမြားရနျဖွဈရုံပငျမကတော့။ သတျပုတျရိုကျနှကျသညျအထိ ဖွဈလာသညျ။ သားသမီးမရှိတော့ တယောကျနှငျ့ တယောကျ သိပျပွီး သံယောဇဉျထားကွပုံမရပေ။ သူတို့လငျမယား အိမျထောငျကတြာ သုံးနှဈကြျောပွီဖွဈသညျ။ တနှဈလောကျပဲ သောကကငျးကငျးဖွငျ့ နခေဲ့ရသညျ။ တနှဈကြျောတော့ ကြျောဌေးက ဗှဖေောကျလာသညျ။ ကြျောဌေးအကွောငျးတှကေို သီတာ မကွားခငျြလဲ ကွားရသညျ။
မသိခငျြပဲ သိရသညျ။ ကြျောဌေး အပြျောအပါးလိုကျစားသညျတဲ့။ ဒီကိစ်စနဲ့ပတျသကျပွီး သီတာက ဖွောငျးဖပြွောဆိုတော့ သူကရနျလုပျသညျ။ အိမျပွနျလာတိုငျးလညျး မူးမူးလာတတျသညျ။ လုပျသညျ့အလုပျက လိုငျးကား ဒရိုငျဘာ။ ဝငျငှကေောငျးတော့ ကြျောဌေး ပကျြတော့သညျ။ ဇနီးမယား သီတာကိုလညျး ကွငျကွငျနာနာ မရှိသညျ့ အပွငျ ဘာမဟုတျသညျ့ ကိစ်စလေးနှငျ့ ရိုးမယျဖှဲ့ ရိုကျလားပုတျလားလုပျလာသညျ။
သူတို့လငျမယားကို ဘယျသူကမှ ပေးစားခဲ့တာမဟုတျ။ သူတို့ခငျြး ခဈြကွိုကျ၍ ညားခဲ့ကွတာဖွဈသညျ။ တနှဈလောကျပဲ အိမျထောငျရေးသုခကို ခံစားရပွီး နောကျပိုငျး စိတျညဈစရာ၊ သောကရောကျစရာတှနှေငျ့ ကွုံတှနေ့ရေသညျသာမက အသားနာအောငျပါ ရိုကျနှကျလာတော့ သူမ ကြျောဌေးကို စိတျနာလာသညျ။ သူမ အနဖွေငျ့ မယားဝတ်တရားကပြှေနျစှာ သစ်စာရှိရှိ ပေါငျးသငျးလာပမေယျ့ ကြျောဌေးက နှိပျစကျလာတော့ သီတာမှာ မခံနိုငျတော့သညျ့အဆုံး အထုပျပိုကျ၍ အိမျပျေါမှ ဆငျးလာခဲ့သညျ။ အိမျပျေါမှ ဆငျးလာသညျဆိုရာမှာလညျး တခွားမိတျဆှသေူငယျခငျြးတှေ အိမျ၊ ကိုယျ့ဖကျက ဆှမြေိုးတှေ အိမျမှာသှားနလြှေငျ ရိုးမယျဖှဲ့၍ အပွဈတငျ သမုတျကာ ကြျောဌေးက သူ့အပွဈကို ကိုယျ့အပွဈ လုပျနိုငျသေးသညျ။
ဒီတော့ သီတာမှာ ကြျောဌေး၏ အဈမဖွဈသူ ညိုမီ၏ အိမျသို့ ဆငျးလာခဲ့လသေညျ။ ညိုမီမှာ လငျမယားနှဈယောကျထဲဘဲရှိပွီး နှဈယောကျစလုံးကအလုပျနှငျ့ဆိုတော့ သီတာ ခိုကိုး၍ ရသညျ။ ပွီးတော့ ယောငျးမအရငျးဖွဈရုံမက ညိုမီနှငျ့ သီတာတို့က လမျးထဲတှငျ ငယျငယျထဲက ကစားဖျောကစားဖကျတှဖွေဈသညျ။ ထို့ပွငျ ညိုမီက သူ့မောငျ ကြျောဌေးအကွောငျးကို ခရစေတှေ့ငျးကသြိသညျ။ ပွီးတော့ ငယျသူငယျခငျြးလညျးဖွဈ၊ ယောငျးမလညျးဖွဈသူ သီတာ့ဘကျမှ အမွဲနာတတျသူဖွဈသညျ။
အရငျထဲက ကြျောဌေးဆိုးလာလြှငျ သီတာ့အား သူမ၏ အိမျတှငျလာနရေနျ ညိုမီက အမွဲချေါတတျသညျ။ အခုတော့ သီတာမှာ ညိုမီအိမျသို့ တကယျရောကျလာရပွီဖွဈသညျ။ ကြျောဌေးက သူ့အဈမကိုတော့ ငယျကွောကျဖွဈသညျ။ အခု သူ့ဘကျက မမှနျတော့ ညိုမီကို မကျြနှာခငျြးမဆိုငျရဲတာ ကွာပွီဖွဈသညျ။ သီတာအတှကျလညျး ညိုမီတို့အိမျမှာ အလုံခွုံဆုံးဖွဈလသေညျ။ ထို့အပွငျ ညိုမီယောကျြား ကိုအေးကလညျး နာမညျနဲ့လိုကျအောငျ အေးသူဖွဈ၏။ ရုံးတရုံးတှငျ စာရေးလုပျနသေညျ။
ညိုမီက ဈေးထဲတှငျ ကုနျခွောကျဆိုငျရှိသညျ။ သူတို့တှငျ သားသမီးကလညျး မရှိလတေော့ သီတာသူတို့အိမျရောကျပွီး ညိုမီမှာ ကူဖျောလောငျဖကျရကာ သူတို့အိမျလေးမှာ စိုစိုပွပွေလေေးဖွဈလာသညျ။ အရငျကဆိုလြှငျ ညိုမီမှာ ညနဈေေးသိမျး၍ ပွနျလာလြှငျ ဟငျးခကျြစရာပါတခါထဲ ဝယျလာပွီး အိမျကတြော့ မောမောနှငျ့ မနားနိုငျ။ ခကျြရပွုတျရသေးသညျ။ ဒါမှ မနကျ သူမဈေးထှကျလြှငျ ထမငျးခြိုငျ့ အသငျ့ဖွဈနိုငျလို လငျတျောမောငျအတှကျလညျး ထမငျးခြိုငျ့အသငျ့ဖွဈနိုငျမညျ။ တပတျတှငျ ဥပုတျရကျတရကျထဲသာ ဈေးပတျ၍ ထိုနတှေ့ငျမှ ညိုမီမှာ လြှျောစရာဖှပျစရာမြားကို စု၍ လြှျောဖှပျရလသေညျ။
အိမျရှငျးဖို့ကတော့ ဝေးရော။ ညိုမီမှာ ဖတျဖတျကိုမောလသေညျ။ အခု သီတာရောကျလာတော့မှ အဆငျပွသေညျ။ ညနေ ညိုမီပွနျလာလြှငျ ဟငျးခကျြစရာတှေ သူမကို ပေးလိုကျရုံပငျ။ သီတာ သူ့ဖာသာ ခကျြသညျ။ ညိုမီက ရခြေိုးထမငျးစားပွီး နားရုံသာဖွဈသညျ။ ထို့ပွငျ ညိုမီဈေးက ပွနျလာလို့ အိမျထဲဝငျလိုကျတာနှငျ့ ရှုပျပှနသေော အိမျထဲကိုကွညျ့ပွီး အမောဆို့သှားရတတျသညျ။
အခုတော့ တအိမျလုံး ရှငျးနရေုံသာမက ပစ်စညျးလေးတှကေလညျး သူ့နရောနှငျ့သူ သပျသပျရပျရပျဖွဈနကော အိမျလြှာထိုးခငျးလေးတှမှောလညျး နငျးရကျစရာမရှိအောငျ ပွောငျလကျ၍နသေညျ။ ညိုမီ သီတာ့ကို စိတျထဲမှ ကွိတျကြေးဇူးတငျနမေိရုံမက နှုတျမှလညျး ကြေးဇူးတငျကွောငျးပွောမိသညျ။ ထိုအခါမြိုးတှငျ သီတာက ခပျပွုံးပွုံးဖွငျ့ “မလိုပါဘူး ယောငျးမရာ” ဟုသာ ပွနျပွောလရှေိ့သညျ။ ဒီနေ့ ညိုမီအိမျပွနျရောကျတော့ ဖိနပျခြှတျမှ တနျးတှငျ လြှျောပွီးသား အဝတျတှေ ပွနျ့၍ နသေညျ။ ” သီတာရေ.. သီတာ.. ” ” လာပွီ ယောငျးမရေ.. ” သီတာ မီးဖိုထဲမှ ပွေးထှကျလာသညျ။ အနားရောကျတော့.. ” ပေး.. ယောငျးမ.. ” ညိုမီ၏ လကျထဲမှ ဟငျးခကျြစရာမြားထညျ့ထားသော ကြှတျကြှတျအိတျလေးကို လှမျး၍ ယူသညျ။
” ဒီအဝတျတှေ ညညျး လြှျောထားတာလား.. ” ” အို.. ယောငျးမကလညျး အိမျမှာ သီတာပဲရှိတာပဲဟာ.. ” ” မလုပျနဲ့ သီတာ.. မလုပျနဲ့.. အဝတျတှကေို ငါဈေးပိတျတဲ့နမှေ့ လြှျောပါ့မယျအေ.. အဝတျတှတေော့ မလြှျောပါနဲ့ဟယျ.. တောငျးပနျပါတယျ.. ” ” အျော.. ယောငျးမကလညျး အကုနျလြှျောတာမှ မဟုတျတာ.. နဲနဲပဲ ခှဲလြှျောတာပါဟာ.. ဈေးပိတျရကျကတြော့ ယောငျးမသကျသာတာပေါ့.. ” ပွောလဲပွော သီတာမှာ ကြှတျကြှတျအိတျလေးကိုဆှဲ၍ မီးဖိုထဲဝငျသှားလသေညျ။ ညိုမီကတော့ သီတာ၏ နောကျကြောကို ကွညျ့ရငျး သကျပွငျးတခခြဖြွငျ့ ကနျြခဲ့လသေညျ။
တဖကျခနျးဆီမှ တခြှတျခြှတျနှငျ့ တီးတိုးစကားသံမြားကွားရသဖွငျ့ အိပျမပြျောသေးသော သီတာက နံရံရှိ သံပေါကျရာ အဟောငျးလေးမှတဆငျ့ ခြောငျးကွညျ့မိသညျ။ အခနျးထဲတှငျ ငါးတိုငျအား မီးလုံးလေးက လငျးလငျးခငျြးခငျြးဖွဈနသေညျ။ သူမတှလေို့ကျရသညျက… ညိုမီက ကုတငျပျေါတှငျ လကျထောကျကာ ဖငျကွီးကုနျးပေးထားသောကွောငျ့ နို့ကွီးနှဈလုံးက တှဲလှဲ လှုပျရမျးနသေညျ။ ညိုမီ ဖငျကွီးနောကျတှငျ ဒူးထောကျလြှကျ လကျနှဈဖကျက ခါးကိုစုံကိုငျကာ လီးတနျတဝကျဝငျနသေော စောကျပတျထှားထှားကွီးကို ကိုအေးက စိုကျကွညျ့နသေညျ။ လမှေးမဲမဲကွီးမြားက အုံကောငျးလှပွီး တုတျထှားလှသော ကိုအေးလီးကွီးကို သီတာတယောကျ တအံ့တသွလေး စူးစိုကျကွညျ့နမေိသညျ။
” ဖွေးဖွေးလုပျနျော.. မောငျ.. ” သီတာနားတှေ ထူပူကုနျသညျ။ သီတာ အိမျထောငျရှငျတယောကျဖွဈသျောလညျး သညျလို တခွားမိနျးမနဲ့ ယောကျြားတို့ လိုးသော မွငျကှငျးမြိုး တခါမှ မမွငျဖူးခဲ့။ ကိုအေးက လီးကွီးကို နဲနဲပွနျဆှဲထုတျကာ ခပျဆတျဆတျနှငျ့ ခပျပွငျးပွငျးလေး ဆောငျ့လိုးလိုကျရာ ဗှကျကနဲ မွညျသံနှငျ့အတူ လီးခြောငျးကွီးက လြှောကနဲ ဝငျသှားပွီး အရငျးထိ မွှုပျ၍သှားလသေညျ။ ” အား.. အား.. ကြှတျ.. ကြှတျ.. ” ညိုမီက သူမ၏ ဖငျကွီးကို လကျတဖကျဖွငျ့ နောကျပွနျပှတျရငျး ညီးညူလိုကျသံမှာ နာလို့လား ကောငျးလို့လား သီတာ မဝခှေဲတတျ။
အဆုံးထိဝငျနသေော လီးကွီးကို ပွနျမဆှဲထုတျပဲ သူမ၏ ဖငျကွီးတှကေို ဆုပျနယျရငျး ဖငျကို စကောဝိုငျး ဝိုငျးသလို အထကျအောကျဝဲယာယမျးပေးသညျ။ ထိုအခါ လီးကွီးက ညိုမီစောကျခေါငျးထဲတှငျ ပတျလညျမှနေ့ရေော့မညျ။ ထို့ပွငျ လီးက ဖိကပျထားတော့ စောကျဖုတျနှုတျခမျးသားပတျလညျကိုရော စောကျဖုတျအုံကို ပှတျတိုကျနလေတေော့ ညိုမီမှာ ဖငျကွီးတှေ တလှုပျလှုပျဖွဈလာနသေညျ။ ” မောငျ.. မောငျရယျ.. အ.. ဟငျး.. ” ညိုမီက မပီမသလေးငွီးရငျး မကျြနှာလေးကို ဟိုဖကျဒီဖကျ စောငျးသှားသညျ။
ကိုအေးက ညိုမီ၏ ခါးကငျြကငျြလေးကို ပွောငျးကာ ဆုတျကိုငျရငျး သူ၏ ပွောငျလကျနသေော လီးခြောငျးကွီးကို ညိုမီစောကျပတျထဲသို့ ပကျကြိသှားနှုနျးဖွငျ့ ဆှဲထုတျလာနသေညျ။ သီတာတယောကျဘာမှ သတိမရဘဲ ဆကျလကျခြောငျးနမေိရာ အကွောပွိုငျးပွိုငျးထနပွေီး သနျမာတုတျခိုငျလှသညျ့ လီးကွီးကို မွငျလိုကျပွီဆိုကတညျးက ကွကျသီးမှေးညှငျးမြားထကာ တဖငျြးဖငျြးခံစားလာရသညျ။ စောကျပတျထဲမှ အရညျကွညျလေးမြားစိမျ့ထှကျကုနျသညျ။ ” အ.. အီး.. ဟငျး.. ဟငျး.. ” အသံလေးက တိုးတိုးလေးပဲ ဖွဈသညျ။
သို့သျော သီတာ ကောငျးကောငျးကွားနရေသညျ။ သီတာ၏ ခွတှေေ လကျတှေ အေးစကျလာသညျ။ နှလုံးခုနျနှုနျးပါမွနျလာသညျမို့ ကိုယျပါရောပွီး အလိုလိုမောလာသညျ။ နထငျစပျမှာ ခြှေးသီးလေးမြား စို့လာကာ အာခေါငျတှခွေောကျလာပွီး တံထှေးလေးမြိုလိုကျရသညျ။ ” ဗွှတျ.. ဘှတျ.. ” ” အ. ရှီး.. ကြှတျ.. ကြှတျ.. ” ခြောငျးကွညျ့နသေော သီတာမှာ အသားတှေ တဆတျဆတျတုနျလာသညျ။ ဒူးတှကေ ကှေးညှတျခငျြနပွေီ။
ရုတျတရကျ သူမ၏ အောကျနှုတျခမျးကို ကိုကျကာ စောကျဖုတျကို ယောငျယမျးပွီး စမျးလိုကျမိသညျ။ သီတာက လကျညှိုးကို စောကျခေါငျးထဲ သှငျးကာ ထိုးမှကေလိနမေိသညျ။ လကျမလေးကလညျး စောကျစလေ့ေးကို ပှတျခကြေစားနမေိသညျ။ ” အငျ့.. အငျ့.. အ.. အ.. ” ” ပွှတျ.. ဗွဈ.. ပွှတျ.. ” ကိုအေးက မီးကုနျယမျးကုနျတလစပျဆောငျ့နလေရော ဂှေးစိတှဲတှဲကွီးမြားက ညိုမီဆီးခုံအထိ ကော့ကော့ပွီး ဖြောကျကနဲ ဖတျကနဲ ရိုကျသညျ။
ပွှတျကနဲ ပွဈကနဲ အသံလေးတှကေ သုံးလေးခကျြ ဆောငျ့မှ တခါထှကျပျေါလာတတျသညျ။ ကိုအေးက ညိုမီကို စိတျရှိလကျရှိလိုးဆျော နသေညျကို မွငျသောအခါ သီတာမှာ သူမ၏ လကျညိုးကို စောကျခေါငျးလေးထဲသို့ အတငျးပငျ ထိုးမှပေေးလိုကျမိသညျ။ ကိုအေးမှာ ညိုမီ၏ နို့အစုံကို အားရပါးရဆှဲလိုကျ၊ ဖငျသားကွီးတှကေို ဆုတျနယျလိုကျနှငျ့ အလုပျရှုပျနသေညျ။ ကိုအေး ဆောငျ့လိုးသညျ့ အရှိနျပွငျးထနျလာလေ သီတာ၏ လကျညိုးလေးကလညျး ကွမျးလာလဖွေဈသညျ။
ကာမမီးလောငျမွိုကျမှုကွောငျ့ သီတာ့ခမြာ မရှုမလှ လူးလူးလှနျ့လှနျ့ဖွဈလကျြ နှုတျမှပငျ မပီဝိုးတဝါး အသံလေးမြား ခပျသဲ့သဲ့ထှကျကာ ညီးညူနမေိသညျ။ ညိုမီက ကုတငျဘောငျကို လကျနှဈဖကျဖွငျ့ တငျးတငျးဆုတျပွီး မကျြလုံးလေးတှမှေိတျကာ နှုတျခမျးလေးမြားကို ကိုကျလြှကျ ခေါငျးလေးမော့ကာ မော့ကာ ခံနရေရှာသညျ။ နှုတျခမျးလေးစထေ့ားသညျ့ကွားမှ လညျခြောငျးသံတအငျ့အငျ့က ဆောငျ့ဆောငျ့ထှကျလာသညျ။ သီတာတယောကျ သူမရှမှေ့ မွငျကှငျးကို အာသာငမျးငမျး ကွညျ့နလေသေညျ။
ကိုအေးက အဆကျမပွတျဆောငျ့လိုးနခေိုကျမှာပငျ ညိုမီက ဖငျကွီးကို နောကျသို့ စညျးခကျြဝါးခကျြကကြလြေး ပွနျဆောငျ့ပေးနလေသေညျ။ ” အား.. ရှီး.. ကောငျးလိုကျတာ.. မောငျရယျ.. ” ညိုမီက မကျြတောငျလေးမှေးပွီး အဈတဈတဈအသံလေးနှငျ့ ပွောလိုကျသံကို ကွားလိုကျရသောအခါ သူမမှာ ညိုမီကို နရေငျးထိုငျရငျး မနာလိုဖွဈမိလသေညျ။ ကိုအေးက လကျမောငျးကွောကွီးတှေ ထောငျထလာအောငျ ညိုမီ ဖငျကွီးကို ဖဈြညှဈရငျး လီးခြောငျးကွီးကို အဆုံးထိ ပဈဆောငျ့လိုကျပွီး လီးကွီးကို စောကျပတျထဲ အတငျးဖိကပျ ကိုအေး၏ ကိုယျကွီးသညျ တဆတျဆတျဖွဈသှားလသေညျ။ သီတာတယောကျ အိပျရာထကျဝယျ တကိုယျတညျးလှဲရငျး အိပျပြျောဖို့ကွိုးစားနမေိသညျ။
သီတာ မကျြလုံးမှိတျလိုကျတိုငျး ကိုအေး၏ သံခြောငျးကွီးအလား မာကြောတငျးထနသေော အားရစရာ ကောငျးလှသညျ့ လီးတနျကွီးကသာ အရိပျထငျနလေသေညျ။ သူမ၏ ရငျထဲတှငျမတော့ ကိုအေးသညျ ထှားကွိုငျးလှသညျ့ လီးကွီးကို ပိုငျဆိုငျထားသညျ့ အားကောငျးမောငျးသနျယောကျြားတဦးပါလားဟုသာ ရငျတုနျပနျးတုနျလေး တှေးမိလိုကျလတေော့သညျ။ နလေ့ညျဘကျ အဝတျလြှျောရနျအတှကျ သီတာမှာ ထမီရငျလြားလေးဖွငျ့ ညိုမီတို့ အိပျခနျးထဲသို့ အဝတျဟောငျးတှကေိုယူရနျဝငျခဲ့ရာ ကိုအေးနှငျ့ ပကျပငျးတိုးတော့သညျ။ ” အျော.. ဒီနေ့ အကို ရုံးပိတျတာပဲ.. ” ” အဝတျတှေ မလြှျောပါနဲ့ဟာ.. ညိုမီအားတဲ့ရကျကမြှ လြှျောမှာပေါ့ ” ကိုအေးက အားနာစှာဖွငျ့ ပွောသညျ။ ” ရပါတယျ.. အကိုကလဲ.. သီတာ အားနတောပဲဟာ.. ” တားနသေညျ့ကွားမှ သီတာမှာ ထမီရငျလြားလေးဖွငျ့ အခနျးထဲမှ အဝတျတှကေို ယူသညျ။
ထမီလေးကို ကဈြကဈြလဈလဈလေး ရငျလြားထားသညျ့ သီတာအား ကိုအေးက စိုကျ၍ ကွညျ့နမေိသညျ။ သီတာ၏ ကိုယျလုံးကိုယျထညျမှာ ညိုမီထကျ နဲနဲလေးပို၍ မို့ထှားပွီး အသားအရညျမှာ ညိုမီထကျ ပိုတငျးမာကဈြလဈလိမျ့မညျဖွဈကွောငျး ကိုအေး မွငျရုံဖွငျ့ အကဲခတျမိသညျ။ ဘာအခုအခံမှ မပါသဖွငျ့ အရှိကို အရှိအတိုငျး အဖုအထဈ အမို့အမောကျတှကေ ထငျရှားနသေညျ။ အောကျပိုငျးတှငျလညျး အောကျခံပငျတီ ဝတျမထားပဲ ရငျလြားထားသော ပွောငျအနကျထမီလေးအောကျမှ ဖွောငျ့စငျးလုံးတဈသော ပေါငျတနျရှညျကွီးမြားနှငျ့ ကွီးမားလှုပျခါယမျးသှားသော တငျသားအစုံကလညျး မကျမောစရာကွီးဖွဈနသေညျ။
လကျပှနျးတတီး အနမြေားလာတော့လညျး ဆနျ့ကငျြဘကျလိငျမြားက ဆှဲဆောငျမှုရှိလာသညျမို့ တောငျ့သော ဖွောငျ့သော လှသော သီတာကို ကိုအေး စိတျမဝငျစားဘဲ မနနေိုငျတော့ပေ။ အဝတျမြားယူပွီး ပွနျ၍လှညျ့အထှကျ သူမကို စိုကျကွညျ့နသေော ကိုအေး၏ မကျြလုံးမြားကို ရငျဆိုငျမိကာ သီတာမှာ ရငျတှတေဒိတျဒိတျခုနျသှားရသေးသညျ။ ကိုအေးနှငျ့ ညိုမီတို့ လငျမယားနှဈယောကျမှာ ပိတျရကျခွငျးမတူကွပေ။
ကိုအေးမှာ ရုံးဝနျထမျးဖွဈ၍ စနေ၊ တနင်ျဂနှနေမြေ့ားတှငျ အလုပျနားရသညျ။ ညိုမီကတော့ ဈေးပိတျရကျဖွဈသော ဥပုသျနတှေ့ငျမှ နားရလသေညျ။ ကိုအေးမှာ မြားသောအားဖွငျ့ ရုံးပိတျရကျတှငျ မနကျစာစားပွီးသညျနှငျ့ တနကေုနျ အပွငျသို့ ထှကျနတေတျသညျ။ ညနစေောငျးတော့မှ ညိုမီနှငျ့အတူ အိမျသို့ပွနျလာလရှေိ့သညျ။ ဒီတပတျရုံးပိတျရကျတှငျတော့ ကိုအေးမှာ အပွငျသို့မထှကျဘဲ အိမျတှငျမွဲနသေညျ။ ကိုအေးတယောကျ အခုတော့ ဂနာမငွိမျဖွဈနမေိသညျ။ ဒီအိမျလေးထဲမှာ သူနှငျ့ သီတာ နှဈယောကျတညျး။ စားရမှာလဲ သဲနဲ့တရှပျရှပျ၊ လှတျပေးလိုကျရမှာလဲ အဆီတဝငျးဝငျးဖွဈနသေညျ။ ရခြေိုးခနျးအနား သှားခြောငျးနားထောငျလိုကျခါမှ ပိုစိတျလှုပျရှားလာရသညျ။ တဗွနျးဗွနျးရခြေိုးနသေော သီတာလေးကို မကျြလုံးထဲမွငျယောငျကွညျ့မိသညျ။ သီတာ၏ ခရာတာတာ မကျြနှာပေးလေးကို မွငျမိရငျး ကိုအေး အခဈြစိတျတှေ လှိုငျးထလာရတော့သညျ။ ရခြေိုးခနျးတံခါးကို အမှတျတမဲ့ကွညျ့မိတော့ ဂကျြထိုးထားဟနျမတူ။
ဟတတလေးဖွဈလို့နရော ကိုအေး စိတျထဲ သခြောပွီဟု တှကျလိုကျတော့သညျ။ ဒီလောကျ အထာပေးနမှေတော့ သီတာလေးကို ခနျြထားလို့မဖွဈတော့ပွီ။ ” ကြှီ ” ” အို.. အို.. အကိုအေး.. ” ဂကျြထိုးမထားသော ရခြေိုးခနျးတံခါးက ရုတျတရကျ ပှငျ့သှားပွီး ကိုအေးက ရခြေိုးခနျးလေးထဲ ဝငျလာသညျ။ ကိုအေးက အပျေါပိုငျးကို ဗလာကငျြးထားရာပွီး ခါးတှငျသာ ပုဆိုးဝတျထားရာ မို့မောကျကဈြလဈသော ရငျအုပျကွီးကို ကွညျ့ရငျး သီတာရငျတှခေုနျနမေိသညျ။ အံကွိတျကာ မာနျထနရေငျး တံထှေးမြိုခလြိုကျသော ကိုအေးကိုမွငျမိတော့မှ ကွကျသီးတဖွနျးဖွနျးထသှားသညျ။
ကိုအေးကတော့ ရပေနျးအောကျမှ သီတာ့ကို ဇှတျတရှတျ အနမျးတှပေေးလတေော့သညျ။ ကိုအေး၏ ထူထဲသော နှုတျခမျးထူကွီးတှကေ သူမ၏ နီတြာရဲနှုတျခမျးလေးကို ဆှဲစုပျနမျးနသေညျ။ တဖနျ လြှာဖြားလေေးဖွငျ့ သူမ၏ လြှာဖြားလေးကို တှထေိ့ကလိပေးနသေညျ့အပွငျ သူ၏ လကျနှဈဖကျကလဲ သီတာ၏ ကိုယျပျေါရှိ ကာမခလုတျတို့ကို တရှရှပှတျသပျပေးသညျ။ သီတာ့ခမြာ ကိုအေး၏ သနျမာသော လကျမောငျးကွီးဖွငျ့ ရဈပတျထားသညျမို့ မလူးသာမလှနျ့သာ ဆန်ဒရမ်မကျတို့ လှမျးနပွေီမို့ သီတာ့မှာ မငွငျးဆနျသာတော့ပဲ သူမ၏ လကျခြောငျးလေးမြားဖွငျ့ ကိုအေး၏ ဦးခေါငျးမှ ဆံပငျမြားကို ထိုးဖှပေးနလေသေညျ။
ရပေနျးအောကျထဲ အတနျကွာ နမျးနေ ကိုငျနပွေီးနောကျ ကိုအေးသညျ သီတာ့ကို လှတျပေးလိုကျသညျ။ ရစေိုထမီလေးကို အနညျးငယျလြှော့ခပြွီး ရစေကျရပေေါကျလေးမြားတှဲခိုနသေော သီတာ့နို့လေးနှဈလုံးကို ကိုအေး ခြိုမွိနျစှာ စို့သညျ။ သီတာ့ခမြာ လကျတဖကျက ထမီလေးကို ထိနျးထားရငျး ကနျြလကျတဖကျနှငျ့ ကိုအေးကြောပွငျကွီးကို သိုငျးဖကျထားမိတော့သညျ။ ကိုအေးက ပုဆိုးကို ဘယျတုနျးက ခြှတျခလြိုကျမှနျးမသိဘဲ သူ့လီးခြောငျးကွီးက သီတာ့ စောကျဖုတျအုံတဝိုကျမှာ ဟိုထိုး သညျထောကျနှငျ့။ ရလေဲထမီလေးခံနလေို့သာ တျော တော့သညျ။
အထိအတှမေ့ရှိတာကွာပွီမို့ သီတာတကိုယျလုံး တုနျရီနသေညျ။ ဒူးမြားညှတျကခြငျြလာသညျ။ ကိုအေးလကျကွီးမြားက ရစေိုထမီလေးအောကျမှ ထှားကွိုငျးဖုထဈနသေော တငျပါးကွီးမြားကို ဖဈြညှဈနသေညျ။ ” သီတာ ” တိတျတဆိတျမှုကို ဖွိုခှငျး၍ ကိုအေးကချေါလိုကျသညျ။ ” ရှငျ.. ” ” ဟိုဘကျ လှညျ့လိုကျပါလားကှယျ ” ” အငျး.. အာ.. အကိုကလညျး ဘာကွီးမှနျးလဲ မသိဘူး.. ” သီတာက မကျြနှာလေး ရဲသှားရာမှ မကျြစောငျးလေးထိုးပွီး ပွောလိုကျပုံလေးမှာ ဆှဲနမျးပဈခငျြစရာ ကောငျးလှသညျ။ သီတာ့ရငျထဲလှိုကျဖိုပူထူပွီး ကိုအေးကို ကြောခိုငျးရငျးလှညျ့လိုကျသညျ။
” အကို သီတာ့ကို ခဈြပါရစေ ” ” အကိုရယျ မသငျ့တျောပါဘူး.. ယောငျးမသိသှားရငျ မကောငျးဘူး.. ” ပါးစပျမှငွငျးပယျနပေမေယျ့ ကိုအေးက သီတာကို အနောကျမှ သိုငျးဖကျရငျး ထမီလေးကို ဖွခေလြိုကျသညျ။ ဖွူဝငျးနသေော သီတာ့ဖငျအိုးကွီးက ကိုအေးကို ရငျသကျရှူမောသှားစသေညျ။ ” အကိုကလဲ အဟငျ့ … ဘာလို့ အကွာကွီး စိုကျကွညျ့နရေတာလဲ… လုပျမဲ့ဟာကို မလုပျသေးပဲနဲ့ ” သီတာက နံရံကို တံတောငျလေးနှငျ့ထောကျရငျး ကိုအေးရှဝေ့ယျ ဖငျကွီးကို ပိုကော့ကာ နောကျသို့ ပဈပေးလိုကျသညျ။ စောကျဖုတျလေးက ဖငျကွားမှ အနောကျသို့ အုံလိုကျ ပွူးထှကျလာသညျ။
ခြှဲတဲတဲနှာသံလေးနှငျ့ တီးတိုးပွောလိုကျသော သီတာ့စကားကိုကွားမှ ကိုအေးက ဖငျကွီးနောကျနားသို့ တိုးကပျရငျး လီးကွီးကို စောကျပတျအဝတှငျ တဖေို့ကွိုးစားတော့သညျ။ သီတာက သူမ၏ ကွီးမားလှသော တငျပါးကွီးနှဈလုံးကို ဘယျညာယိမျးနှဲ့ရငျး ဆော့ကစားနရော တောငျနသေော ကိုအေး၏ လီးတနျကွီးနှငျ့ သီတာ၏ စောကျဖုတျလေးမှာ မထိတထိဖွငျ့ ယမျးခါနသေညျ။ တခကျြတခကျြ သီတာက ကိုအေး၏ လီးကွီးကို စောကျပတျအောကျသို့ လြှိုသှငျးထားပွီး ပေါငျနှဈလုံးနှငျ့ ညှပျခါ ရှတေို့းနောကျဆုတျလုပျနသေဖွငျ့ လီးကွီးမှာ မခငျြ့မရဲကွီးဖွဈလာပွီး ကိုအေးမှာ ရှူးရှူးရှဲရှဲအသံတှေ ထှကျလာသညျ။
” ခဈ.. ခဈ.. ခဈ မာနျထလာပွီ.. ခဈခဈ.. ” ကိုအေးက လကျနှဈဖကျဖွငျ့ သီတာ၏ ဖငျကွီးတှကေို ကိုငျရငျး လီးနှငျ့စောကျပတျ တဲ့တဲ့ဖွဈစရေနျ ကွိုးစားရငျး နှာမှုတျသံကွီးက ပွငျးထနျ၍ လာသညျ။ သီတာက သဘောကပြွီး တခဈခဈရယျနလေသေညျ။ ” သီတာ့ ဖငျကွီးကို ငွိမျငွိမျထားကှာ ” ” အိုး.. ဝငျအောငျလုပျပေါ့လို့ ခဈ ခဈ.. ” သီတာက ဆော့ကစားနညျးတခုလို့ပငျ သတျမှတျနသေလားမသိပါ။ ကိုအေးကို ပွောငျစပျစပျပွောရငျး လီးတနျကွီးကို စောကျပတျဝသို့မဝငျအောငျ နိမျ့ခြီမွငျ့ခြီ ဘယျညာရမျးခါ၍ ရှောငျတိမျးနရော ကိုအေးကြှဲမွီးတိုလာသညျ။
ခပျဖှဖှကိုငျထားသော သီတာ့ခါးသေးသေးလေးကို သူ့လကျကွီးဖွငျ့ တငျးကွပျစှာ စုံကိုငျ၍ ယမျးခါနသေော ဖငျကွီးကို ထိနျးခြုပျလြှကျ ဖငျကွားထဲမှ နောကျသို့ပွူးထှကျနသေော စောကျဖုတျအုံကွီးကွားသို့ လီးထိပျကွီးကို မရမက သှတျသှငျးလိုကျလသေညျ။ ” ပွှတျ .. ဗွဈ .. ” ” အ.. အာ့ .. ကြှတျ ကြှတျ အကိုကလဲ တအားပဲ.. ” ” ညညျးက ငွိမျငွိမျမှ မနတော ” ” ခဈြလို့ကြီစားတာပဲ ဟာကို.. ” ” သီတာ့ စောကျပတျလေးက ကပျြလိုကျတာကှာ.. စီးပိုငျနတောပဲ ” ” အ.. ဟငျ့.. အဈကိုကလဲ ထနျသလား မမေးနဲ့ အ.. အား.. ကြှတျ.. ကြှတျ.. ကြှတျ.. အဝငျကွမျးတယျကှာ.. အဈကို့လီးထိပျဖူးကွီးက တျောတျောမာတာပဲ ရှီး.. ” ” ဗွဈ.. ပလဈ.. ဗွဈ.. ဗွဈ.. ”
” ဟား အား ရှညျလိုကျတာ အကိုရာ အကို့ဟာကွီးက မဆုံးသေးဘူးလား .. အိုး.. အိုး.. ကြှတျ ကြှတျ.. လညျပငျးမှာတောငျ တဈဆို့ဆို့ကွီးဖွဈလာပွီကှာ.. ” ” အဆုံးဝငျလားဟငျ သီတာ ” ” အိ.. အ.. ဝငျတယျ.. ဝငျတယျ.. အဆုံး..ပဲ.. အိ.. အ.. ” သီတာ ဖငျကွီးကို မယမျးနိုငျတော့၊ မဆော့နိုငျတော့ခြေ။ ” ထှကျ.. ထှကျကုနျပွီ ကိုကို.. အ.. အ.. ” စောကျခေါငျးအတှငျး နှေးထှေးစှာ ဝငျရောကျသှားသော လီးတနျကွီး၏ အထိအတှကေ့ ဆနျးပွားခြိုအီလှသညျ။ သှေးသားဆူဖွိုးတုနျးအရှယျမှာ လီးနှငျ့ဝေးနရေတာ ကွာပွီမို့ သီတာတယောကျ ဟနျပငျမဆောငျနိုငျတော့။ ဘယျနှခကျြမှတောငျ ဆောငျ့လိုးတာမခံရသေး၊ လီးကွီးက တငျးတငျးကွပျကွပျတိုးဝငျ ပွနျထှကျနဆေဲမှာပငျ တခြီပွီးသှားရရှာလသေညျ။
သီတာ.. အထဲ သှားကွရအောငျလား.. ” ” ဟငျ့အငျး.. ဒီမှာပဲ နကွေရအောငျလားကှယျ.. နျော.. ” ကိုအေးမှာ ဘာမှထပျမပွောတော့ဘဲ သီတာ့ကိုယျလုံးလေးကို စှကေ့နဲ မခြီကာ သူတို့အိပျခနျးထဲသို့ ပှသှေ့ားပါတော့သညျ။ ” ဘယျကို သှားမလို့လဲဟငျ.. ” ” ကိုယျတို့ ကုတငျပျေါကိုပေါ့ ” ” အငျ.. သူတို့လငျမယားလိုးတဲ့နရောကွီးမှာ.. မကွိုကျပါဘူး.. ” သီတာက ကိုအေး၏ လညျပငျးကို ဟီးလေးခိုရငျး မကျြစောငျးလေးထိုးကာ နှုတျခမျးလေးကို စူတူတူလေးလုပျ၍ ပွောသညျ။ သီတာ၏ အပွောနှဲ့နှဲ့ တိုးတိုးလေးနှငျ့ အပွုံးနုနုခြှဲခြှဲလေးမြားသညျ ကိုအေးကို တငျးတငျးကွီးရဈပတျနှောငျဖှဲ့မိလသေညျ။
သီတာယောကျ သူမခြောငျးကွညျ့ခဲ့သညျ့ ကိုအေးတို့လငျမယား၏ ကုတငျပျေါတငျဝယျ ပယျပယျနယျနယျ အလိုးခံနရေလပွေီ။ ဖွူဝငျးအိစကျသော စောကျပတျဖှေးဖှေးလေးထဲသို့ ညိုမဲပွောငျတငျးနသေော လီးတနျကွီးက ဇိကနဲ ဇိကနဲ ဆောငျ့ဝငျနလေသေညျ။ သီတာကလညျး မခပေါ။ အောကျမှနေ၍ ကိုအေးကို တငျးကွပျစှာဖကျထားရငျး အပျေါမှ လိုးဆောငျ့ခကျြမြားနှငျ့အညီ အခကျြကကြဖြွငျ့ သူမ၏ ဖငျကွီးကို ကော့ပေးနသေညျ့အပွငျ လိုးသညျ့သူပိုကောငျးစရေနျအတှကျ သူမ၏ ဖွူဖှေးကွီးမားလှသော ဖငျကွီးကို စကောဝိုငျး ဝိုငျး၍ ပေးရငျး စောကျပတျထဲရှိကွှကျသားမြားဖွငျ့ လီးကွီးကို တအား တအား ညှဈပေးနပွေနျသညျ။
ကိုအေးမှာ ဖောငျးဖောငျးအိအိ ကဉျြးကဉျြးကွပျကွပျ သီတာ့ စောကျပတျလေးကို လိုးနရေခွငျးမှာ ထူးကဲလှသညျ့ အရသာမို့ သူမကို အစှဲကွီးစှဲသှားလတေော့သညျ။ သီတာ့ခမြာ သူမကိုယျပျေါ၌ ကွီးမားသော ကိုယျလုံးကွီးနှငျ့ဖိထားရငျး အခကျြမှနျမှနျဖွငျ့ အငျတိုကျအားတိုကျ လိုးဆျောနသေညျ့ ဒဏျကွောငျ့ အသကျရှူပါကွပျ၍ မခြိမဆနျ့ခံစားနရေသညျ။ ” ကိုကိုရယျ.. နဲနဲ လြှော့ပါအုံး.. သူ သိပျထနျတာပဲ.. ” ” ကောငျးရဲ့လား.. သီတာ ” ” ကောငျးလှနျးလို့.. အသဲကို ခိုကျသှားတာပဲ ကိုရယျ.. အား ဟငျ့ ဟငျ့.. ” ကိုအေးသညျ သီတာ့အပျေါဖိကပျထားသော ကိုယျလုံးကွီးကို အနညျးငယျကွှပွီး သူ့လကျနှဈဖကျကို သီတာ့ဘေးတဖကျတခကျြစီတှငျ ထောကျကာ အားပါးတရ ဆကျလိုးဆောငျ့လသေညျ။
သီတာက ကိုအေး၏ နဖူးမှ ခြှေးစလေးမြားကို လကျဖဝါးလေးဖွငျ့ လှမျးသုတျပေးလိုကျသညျ။ ” ဒီပုံက အားမရခငျြတော့ဘူး သီတာရာ.. ပုံစံပွောငျးရအောငျနျော ” ” ကိုကို့ သဘောပဲ.. ” ကိုအေးက ဆောငျ့တာကို ရပျလိုကျပွီး သူမ၏ ကိုယျပျေါမှ လှိမျ့ဆငျးလိုကျသညျ။ ပွီးတော့ ကုတငျအောကျသို့ ဆငျးလိုကျသညျ။ သီတာ့ကို ကုတငျစောငျးသို့ရောကျအောငျ ရှယေူ့လိုကျသညျ။ သီတာ၏ ဖငျကွီးမှာ ကုတငျစောငျးသို့ရောကျသှားသောအခါ သူမ၏ ခါးအောကျသို့ ခေါငျးအုံးတလုံးထိုးထဲ့ကာ ခုလိုကျသညျ။
သီတာ၏ စောကျဖုတျကွီးက မို့မောကျတကျလာသညျ။ ကိုအေးက ကုတငျစောငျးဝယျတှဲလောငျးကနြသေော သူမ၏ ပေါငျတနျနှဈဖကျအား အလိုကျသငျ့ ကားစလေိုကျပွီးလြှငျ စောကျဖုတျအကှဲကွောငျးတလြှောကျ လီးတနျကွီးဖွငျ့ စုနျဆနျ လြှောတိုကျပေးလိုကျသညျ။ သီတာ၏ နို့သီးခေါငျးလေးဆီသို့လညျး လကျလှမျးကာ နို့သီးလေးတှကေို လကျညှိုးလကျမတို့ဖွငျ့ ညှပျကာ ညငျညငျသာသာလေး ပှတျခပြေေးလိုကျပွနျသညျ။ ” အ.. ကို.. ကို.. ဟငျ့.. ဟငျ့.. အို.. လုပျမှာလုပျကှာ.. အခြိနျမရှိဘူး.. ” စောကျပတျအကှဲကွောငျးတလြှောကျ လီးထိပျကွီးဖွငျ့ အပှတျခံနရေသဖွငျ့ သီတာ စိတျတှေ မခြိမဆနျ့ ထလာပွီး ဖငျတကွှကွှဖွဈနတေော့သညျ။ ” ဘာလဲဟငျ.. သီတာ ” ” ကမြ..ကမြ မနနေိုငျတော့ဘူး.. ဟငျ့..ဟငျ့.. ” ” ကို ဘာလုပျပေးရမလဲဟငျ ” ကိုအေးက စောကျပတျအဝတှငျ လီးကွီးကိုတထေ့ားရငျး နို့သီးခေါငျးလေးတှကေို ခမြှေမွဲ ခမြှေလကျြမေးသညျ။
” ယား..ယားလှပွီကှယျ.. လိုး..လိုးပါတော့.. အငျ့ ဟငျ့.. ” ကိုအေး၏ အခြော့အမွူနှငျ့ ကြှမျးကငျြညငျသာစှာ နှိုးဆှပေးနမှေုကွောငျ့ ကာမအရသာကို မခံခြိမခံသာ ခံစားနရေသညျ့ ဝဒေနာအတှကျ မပီမသဝိုးတဝါးနှာသံဖွငျ့ အာသာရမ်မကပွစေသေောဌာ သီတာတယောကျ အငမျးမရတောငျးဆိုနမေိတော့သညျ။ ထိုသို့ ငွီးငွူနရေငျး သီတာ့ ဖငျကွီးမြားမှာ ဘယျညာယမျးခါလကျြ လှုပျရှားနသေေးသညျ။ ကိုအေး၏ သှေးသားမြားကလညျး ကွှသထကျ ကွှလာသညျ။ သူ၏ တောငျနသေော လီးကွီးက တဆတျဆတျ ဖွဈလို့နသေညျ။
ထို့ကွောငျ့ နှိုးဆှမှုကို ရပျလိုကျပွီး အကွောကွီးမြား ထောငျထသညျအထိ တောငျ့တငျးမာကြောနသေော လီးခြောငျးကွီး၏ တငေါကျငေါကျဖွဈနသေော လီးထိပျကွီးကို စိုရှဲနီရဲလြှကျရှိသော စောကျပတျလေးထဲသို့ ဆောငျ့သှငျးလိုကျတော့သညျ။ ” ဗွှတျ.. ပလှတျ.. ဒုတျ.. ဒုတျ.. ” ” အမေ့.. ကြှတျ.. ကြှတျ.. ” ” နာသှားလား သီတာ ” ကိုအေးက လီးကစိမျထားပွီးမေးသညျ။ ” ဟငျ့အငျး..ဟငျ့အငျး.. မနာဘူး.. ကိုကို.. ဆောငျ့.. ဆောငျ့..ဆောငျ့ပါ.. တအားဆောငျ့ပေးပါ.. ” သီတာမှာ စောကျခေါငျးထဲ လီးကွီး မတနျတဆတိုးဝငျသှားပွီး သားအိမျခေါငျးကို ထိုးဆောငျ့မိသဖွငျ့ နာကငျြနသေျောလညျး ကောငျးမှနျသညျ့ ကာမအရသာကို တငျးပွညျ့ကပျြပွညျ့ ခံစားရနိုငျရေးအတှကျ အငမျးမရ ကမနျးကတနျး ပွနျဖွရှောသညျ။ ” ပွှတျ.. ဖှတျ.. စှပျ.. စှပျ.. ဖှတျ.. ဖှတျ.. ” ” အား.. ဟား.. ကောငျးလိုကျတာနျော.. ဟငျး.. ဟငျး.. ” ” ပွှတျ.. စှပျ.. ပွတျ.. ပွှတျ.. ပလှတျ.. ” ” အငျ့.. ဟုတျပွီ.. ဆောငျ့..ဆောငျ့.. ” ကိုအေးက ပုံစံအမြိုးမြိုးအနကျ ယခုလို စီးစီးပိုငျပိုငျနှငျ့ လီးတဆုံးဝငျသော ကုတငျစောငျးနညျးကို အကွိုကျဆုံးဖွဈသညျ။
လီးတခြောငျးလုံး အစမှ အဆုံးတိုငျ စောကျခေါငျးထဲ ပှတျတိုကျနသေညျ့အတှကျ ခံရသူ မိနျးမသားကို ပိုအရသာတှစေ့သေလို ကုတငျအောကျမှ မတျတပျရပျ ဆောငျ့ရသညျ့အတှကျ လိုးရသူ ယောကျြားမှာလညျး လှတျလှတျလပျလပျဖွငျ့ စိတျထငျတိုငျး ဆောငျ့နိုငျ ကွမျးနိုငျလသေညျ။ ” ပွှတျ.. ပွှတျ.. စှတျ.. ဖှတျ.. ဖှတျ.. အမလေး.. ကိုရယျ.. ကောငျးလိုကျတာ.. ရှငျ့ကိုတော့ တသကျစှဲပွီ..ရှငျ့.. ” နှဈယောကျစလုံး ကာမအရှိနျက တကျ၍လာလပွေီ။ လိုးဆောငျ့ရသညျ့ အရှိနျကလညျး အားပါးတရရှိလှပါသညျ။ လိုးဆျောနသေညျ့ကွားမှ သူမ၏ နှုတျခမျးလေးမြားကို ရှရှလေးနမျးလိုကျ၊ နို့သီးခေါငျးလေးနှဈခုအား ဘယျပွနျညာပွနျစုပျလိုကျခဲလိုကျ လုပျပေးနပေါသေးသညျ။ ” စှပျ.. ပွှတျ.. ဖှတျ.. ဖှတျ.. ဖှတျ.. ” ” အို.. အို.. ကိုကိုရယျ.. ကောငျး..ကောငျး..ကောငျးလိုကျတာ.. ဟငျ့.. ဟငျ့.. ဆောငျ့.. ဆောငျ့.. ပွီးတော့မယျ.. အ.. အာ့.. အငျး.. ” သီတာ ညီးညူရငျး ခွဖြေားကလေးမြား ကှေးလိုကျ စနျ့လိုကျ ဖွဈသှားပါသညျ။
ထို့အပွငျ ကိုအေး၏ ကြောပွငျကယျြကွီးကို လှတျထှကျသှားမညျ စိုးသညျ့အလား တအားဖကျထားရငျး ကာမအထှတျအထိပျသို့ ရောကျသှားလသေညျ။ သူမ၏ လငျယောကျြားနဲ့ပငျ တခြီကောငျးလောကျသာ ခံဖူးသော သီတာတယောကျ ကိုအေး လိုးတာကို ခံရတော့မှ တသကျနှငျ့တကိုယျ ဆကျတိုကျပွီးတဲ့ အရသာကို တုနျခါ မောဟိုကျစှာ ခံစားနရေတော့သညျ။ ” သီတာ ပွီးသှားပွီလားဟငျ ” ” သှားပါ သူက သိပျကွာတာပဲ.. သီတာဖွငျ့ နှဈခါတောငျပွီးသှားတယျ.. ဟှနျး” သီတာက ရမကျရှိနျမပွသေေးဟနျဖွငျ့ ခပျညုညုလေးပွောသညျ။ ” အကို မပွီးသေးဘူး.. ဆကျလိုးအုံးမှာ.. သီတာ အလိုးခံနိုငျသေးတယျ.. မဟုတျလား ” ” ခံမှာ.. ဘာလို့မခံနိုငျရမှာလဲ.. ကိုကိုလိုးသမြှ ကမြ ခံမယျ.. ”
” ဟုတျပွီ.. ဒါဆို အကို.. ဒီပုံစံအတိုငျးဘဲ ဆကျလိုးမယျ ” စကားပွောနရေငျးက ကိုအေး ကိုယျလုံးကွီးမှာ တလှုပျလှုပျနှငျ့ ဖွဈနရော သီတာ့ စောကျပတျလေးထဲ တဆုံးဝငျနသေော သူ့လီးခြောငျးကွီးက တလှုပျလှုပျနှငျ့ သူမ၏ စောကျပတျအတှငျးသားနုနုလေးမြားကို လီးတနျကွီးဖွငျ့ ထိုးကလနျ့ကာဆှပေးသလိုဖွဈနသေညျ။ ” အငျး.. လုပျ..လုပျခငျြလေ လုပျလေ.. ကို ကလဲ.. ” သူမ၏ ဝတျလဈစလဈကိုယျလုံးလေးကို မကျြတောငျမခတျ ခဏတာရပျကွညျ့နသေော ကိုအေးကို သီတာက စိတျမရှညျသလို ပွောသညျ။
သူမ စကားအဆုံးမှာပငျ သူ၏ လီးတနျကွီးကို ဆှဲထုတျကာ သီတာ့စောကျခေါငျးလေးထဲ ဆောငျ့လိုးလသေညျ။ ကိုအေး၏ အသကျပွငျးပွငျးရှူသံ၊ သီတာ့ ညီးညူမွညျတမျးသံမြားက အခနျးထဲတှငျ ပဲ့တငျထပျလို့နသေညျ။ ထို့အပွငျ ဆီးစပျခငျြးတိုကျမိရာမှ ပျေါထှကျလာသော တဖတျဖတျဆိုသော အသံနှငျ့ ကိုအေး၏ ဂှေးလဥကွီးမြားက သီတာ့ဖငျဆုံကွီးကို ရိုကျမိတဲ့ အသံတဖတျြဖတျြတို့မှာလညျး ဆကျတိုကျထှကျပျေါနကွေသညျ။
” ဘှတျ.. ဘှတျ.. ဖတျ.. ပပျြ.. ဘှပျ.. ဘှပျ.. ဘှတျ.. ” ” အားပါး.. ရှီး .. ဆောငျ့.. ဆောငျ့.. ကမြကို တအားဆောငျ့လိုးစမျးပါရှငျ ဟငျ့.. ဟငျ့.. ဟငျ့..ကိုကို့လီးခြောငျးကွီး တခြောငျးလုံး အဆုံးထိ တခကျြထဲနဲ့ ထိုးစိုကျလိုကျစမျးပါ.. ခံလို့ကောငျးလှနျးလို့ပါ.. အငျ့ အား.. ပါး ဟငျ့.. ” ” ဘှတျ.. ဘှတျ.. ” ကိုအေးသညျ တရှူးရှူးဖွငျ့ အသကျရှူတှေ အရမျးမွနျလာသညျ။ ဆောငျ့လိုးခကျြတှကေလဲ ကွမျးသထကျ ကွမျး၊ မွနျသထကျ မွနျလာတော့သညျ။
ကိုအေးတယောကျ ပွီးကာနီးလာပွီဆိုသညျကို သီတာ သိသညျ။ သူ ပိုအရသာရှိသှားရအောငျ လုပျပေးခငျြသော သီတာက သူမ၏ ဖငျလုံးလုံးကဈြကဈြလေးကို အသာပတျပွီး ကိုအေး၏ ဂှေးအုမြားကို လကျနဲ့ အသာလှမျးကိုငျလိုကျပွီး ဆုပျနယျပေးလိုကျသညျ။ ကိုအေးတယောကျ အရသာတှသှေ့ားတာ သခြောသညျ။ အသကျရှူ ပိုပွနျလာသလို ဆောငျ့ခကျြတှကေလဲ ပိုအားပွငျးကာ ပိုကွမျးလာသညျ။ ထို့နောကျ ကိုအေး၏ လီးကွီး ငေါကျကနဲ ငေါကျကနဲ ဖွဈသှားခြိနျမှာပငျ သီတာက သူမ၏ စောကျပတျလေးကို ညှဈ၍ ပေးလိုကျတော့ရာ ကိုအေး လီးထိပျမှ သုကျရညျမြား စောကျခေါငျးလေး ထဲ ပနျးထညျ့ခံလိုကျရတော့သညျ။
သီတာ့ စောကျပတျထဲသို့ အရှိနျပွငျးပွငျးဖွငျ့ ပူကနဲ နှေးကနဲ သုကျရညျမြား တရကွမျး ပနျးဝငျလာသညျ့ ခနမှာပငျ သီတာတယောကျ သုံးကွိမျမွောကျ ပွီးသှားရတော့သညျ။ ” ဟယျ.. ကွညျ့ပါအုံး.. ခုနတုနျးက လုပျခငျြတိုငျးလုပျ ထငျရာစိုငျးနပွေီး.. အခုကမြှ ဘယျလိုဖွဈလို့ ပြော့ခှနေတောလဲ.. ” အရညျတှေ စိုရှဲကာ ပြော့ခှနေသေော လီးကွီးကို ပယျပယျနယျနယျ ဆုပျကိုငျကွညျ့ရငျး သီတာက ပွောသညျ။
သီတာ့လကျဖဝါးလေးပျေါ၌ အိပျပြျောနသေော မွှပှေေးတကောငျနှယျ စငျးစငျးကွီး ငွိမျနသေော ကိုအေး၏ လီးကွီးမှာ ခပျညိုညိုနှငျ့ တုတျခိုငျလှသညျ။ ကိုအေး၏ လီးကွီးကို လကျနှဈဖကျဖွငျ့ ဘယျညာပွောငျးကစားရငျး တခါတရံ ဂှေးဥကွီးမြားကိုပါ ဖဈြညှဈပေးနသေညျ။ လမှေးမြား ထူပိနျးနသေော ဆီးစပျမှ ထိုးထှကျလာသော လီးတနျကွီးသညျ ဂှေးစိကွီးအောကျသို့ပငျ ရောကျကာ အမွှောငျးလိုကျကွီးဖွဈ၍ နသေညျ။ သီတာက လီးဒဈကွီးကို သူမ၏ လကျခြောငျးလေး၂ခြောငျးဖွငျ့ ညှပျကိုငျကာ ဖွဲခပြွီး အနီးကပျကွညျ့သညျ။ ကွီးမားပွောငျတငျးနသေော လီးခြောငျးကွီးကို သီတာက ဖောငျးကဈဖွူဖှေး သှယျလနြသေော သူမ၏ လကျခြောငျးလေးမြားနှငျ့ အထကျအောကျဆငျ့ကာ လကျနှဈဖကျဖွငျ့ ဖှဖှလေးဆုပျကိုငျလိုကျပွီး လီးတနျကွီးကို ဖွဲခလြိုကျသညျ။ ထို့နောကျ အားမရဟနျဖွငျ့ အားပါးတရ ကုနျး စုပျလိုကျတော့သညျ။
ကိုအေးမှာ အတှထေူ့းကွောငျ့ ရဈမူးသှားရသညျ။ ဒီလို အရသာမြိုးကို ခံစားခငျြတာကွာလှပွီ။ ညိုမီ့ကို ခိုငျးသျောလညျး တခါမှ မမှုတျပေးခဲ့။ အခု သီတာနှငျ့ကမြှ ကိုအေး ဒီအရသာကို ခံစားရတော့သညျ။ ကိုအေးကလညျး သိလိုကျသညျ။ အားမရသေးသော သီတာ့ကို နောကျတခါ ထပျလိုးပေးရပဦေးမညျ။ လီးကွီးကို ကုနျးစုပျနသေော သီတာ၏ ဖငျဘူးတောငျးထောငျထားသညျ့ ဖငျကွီးကို သူ့ဘကျသို့ ဆှဲလိုကျပွီး စောကျဖုတျကွီးကို ဖှဖှလေးပှတျပေးသညျ။ သီတာက တဖွေးဖွေးမာလာပွီဖွဈသော လီးကွီးကို ပါးစပျထဲ ထုတျခြီသှငျးခြီလုပျသညျ။ သူမ၏ လြှာက လီးထိပျဖူးကွီးတခုလုံးနှငျ့ ဒဈကွီးကို ကလိပေးနသေညျ။ ပါးစပျလေးထဲမှ ဒဈကွီးကို အသာပွနျထုတျပွီး ဒဈခြိုငျ့ထဲသို့ လြှာလေးထိုးသှငျးကာ ရဈဝိုကျကစားသညျ။
ထို့ပွငျ လီးခြောငျးကွီးတခုလုံးကို မဆနျ့တဆနျ့ ငုံကာ ပါးလေးတှေ ခြိုငျ့သှားအောငျ စုပျပေးသညျ။ ကိုအေး၏ လီးကွီးမှာ အကွောအပွိုငျးပွိုငျးထ၍ မာကြောထောငျမတျကာ စံခြိနျမှီလာပွီဖွဈသညျ။ ခပျမော့မော့ကွီး တောငျ နသေော လီးတနျကွီးက မီးခြောငျးအလငျးရောငျဖွငျ့ တဖတျြဖတျြ တောကျပကာ တံထှေးလေးမြားဖွငျ့ စိုစှတျပွောငျတငျးနသေညျ။ ခဏလောကျ ဆကျစုပျပေးပွီးတော့မှ သီတာက လီးကွီးကို ပါးစပျထဲမှ ထုတျကာ မကျမောစှာတခကျြကွညျ့ရငျး ငုံ့နမျးလိုကျပွနျသညျ။
” ကို.. နောကျတခါ လိုးကွရအောငျ..နျော.. ” သီတာက မှိုရသူ မကျြနှာမြိုးလေးနှငျ့ ရှနျးရှနျးလဲ့လဲ့လေးပွောလိုကျသညျ။ သူမ၏ စောကျပတျလေးမှာလညျး ကိုအေးပှတျပေး ကလိပေးနမှေုကွောငျ့ စိုရှဲကာ ဖောငျးထနပွေီဖွဈသညျ။ ” သီတာ အပျေါက တကျဆောငျ့ပေးပါလားကှယျ ” သီတာက ကိုအေး အပျေါသို့ ခှ၍ တကျလိုကျပွီး လီးတနျကွီးကို လကျလေးနှဈဖကျဖွငျ့ စုံကိုငျကာ ကိုအေး၏ လီးတဲ့တဲ့ပျေါသို့ စောကျပတျအဝကိုတပွေီ့း ဖွေးဖွေးခငျြးထိုငျခလြိုကျသညျ။
သီတာက တငျးရငျးပွညျ့အငျ့စှာ တိုးဝငျနသေော လီးအရသာကို အံလေးကွိတျကာ ခံစားရငျး ဂှေးစိနှငျ့ ဖငျကွီးထိသညျ အထိထိုငျခလြိုကျရာ ” ဗွဈ.. ပွှတျ.. ဘလှတျ.. ” ” အား.. အ..နာတယျ.. သိလား.. အမေ့.. ” ” ဟငျ.. ဘာဖွဈလို့လဲ သီတာ ” ” အဟငျ့.. အရှိနျလှနျပွီး.. သားအိမျကို သှားထာကျမိလို့ပါ.. ” သီတာ၏ ဖငျကွီးခကျြခငျြးပွနျကွှသှားသညျ။ ရှညျလြားသော လီးကွီးက စောကျခေါငျးနုနုလေးကို မာကွောစှာ ထိုးဆောငျ့မိသှားပုံရလသေညျ။ သီတာက အပျေါမှနေ၍ သူမ စိတျတိုငျးကြ ဖွေးဖွေးတမြိုး မွနျမွနျတဖုံ ဆောငျ့ ဆောငျ့လိုးသညျ။
နို့ကွီးနှဈလုံးက တရမျးရမျးဖွဈနသေညျမို့ ကိုအေးက မကျမောဘှယျကောငျးလှသော နို့ကွီးမြားကို အလှတျမပေးဘဲ ခမြှေဖဈြညှဈပေးနသေညျ။ ” စှတျ.. စှတျ.. ပွှတျ.. ပွှတျ.. စှပျ.. စှပျ.. ” ” ကို ပွနျကော့ပွီး ဆောငျ့ ပေးပါလား.. ” ကောငျးလှနျးသဖွငျ့ ငွိမျ၍ အရသာခံနသေော ကိုအေးက သတိရသှားပွီး သီတာ့ဆောငျ့ခကျြမြားနှငျ့ အညီ သူကလညျး အောကျမှ ကော့ ကော့ပွီး ပငျ့ဆောငျ့သညျ။ ထိုအခါ ဆောငျ့အားနှဈခု ဆုံပွီး ဆောငျ့ခကျြက ပွငျးကာ တကိုယျလုံး တုနျတုနျတကျသှားရသညျအထိ ကောငျးလှသညျ။ ထိလှသညျ။
သီတာ၏ ခန်ဓာကိုယျအတှငျးမှ သှေးသားမြား စုပွုံပေါကျကှဲသှားသညျ။ စောကျခေါငျးထဲမှ အရညျမြားက ဒလဟော ပွိုဆငျးလာကွသညျ။ စောကျရမြေားက ကိုအေး၏ ဆီးခုံပျေါရှိ အမှေးမဲမြား၌ ရှဲနဈနသေညျ။ သီတာက ဇှတျကနဲ ဇှတျကနဲ ထိုငျခလြိုကျတိုငျး လီးကွီးထိပျဖြားက အစှမျးကုနျ ဖွဲကားထားသော သူမ၏ စောကျခေါငျးလေးထဲ တိုး၍ တိုး၍ စောကျစလေ့ေးကို ပှတျကာ ဝငျသှားသညျ။ ” စှပျ.. စှပျ.. ပွှတျ.. ဖှတျ.. ဖှတျ.. ” အပျေါမှ ဆောငျ့နသေော သီတာ၏ ဆောငျ့ခကျြမြားက တဖွေးဖွေးနှေးလာပွီး အောကျမှ ပငျ့ဆောငျ့နသေော ကိုအေး၏ ဆောငျ့လိုးခကျြမြားက သှကျလကျမွနျဆနျလာလသေညျ။
” အငျ့.. အငျ့.. အ အ..မလေး.. ထိတယျ.. ထိတယျ.. ” ထို့နောကျတော့ နှေးနသေော သီတာက အံကွိတျ၍ ခပျသှကျသှကျမြှ လေးငါးခကျြမြှ ဆောငျ့ပဈလိုကျသညျ။ ” ပွှတျ.. စှပျ.. စှပျ.. ဒုတျ.. ဖှတျ.. ” ” အငျ့.. ဟငျ့.. အား.. အား.. အီး.. ” အရုပျကွိုးပွတျဖွဈသှားသော သီတာလေး၏ ဖငျသားကွီးမြားကို လကျနှဈဖကျဖွငျ့ ဖဈြညှဈပွီး ကိုအေးက အောကျမှနေ၍ ဆယျခကျြလောကျ ကော့ပငျ့ဆောငျ့ပွီး သူမကို ရငျခငျြးအပျဆှဲဖကျကာ သုကျရညျမြား လှတျလိုကျပါတော့သညျ ပွီးပါပွီ။
ကျော်ဌေးနှင့် သီတာတို့ လင်မယားမှာ အရင်ကလို တကျက်ကျက် စကားများရန်ဖြစ်ရုံပင်မကတော့။ သတ်ပုတ်ရိုက်နှက်သည်အထိ ဖြစ်လာသည်။ သားသမီးမရှိတော့ တယောက်နှင့် တယောက် သိပ်ပြီး သံယောဇဉ်ထားကြပုံမရပေ။ သူတို့လင်မယား အိမ်ထောင်ကျတာ သုံးနှစ်ကျော်ပြီဖြစ်သည်။ တနှစ်လောက်ပဲ သောကကင်းကင်းဖြင့် နေခဲ့ရသည်။ တနှစ်ကျော်တော့ ကျော်ဌေးက ဗွေဖောက်လာသည်။ ကျော်ဌေးအကြောင်းတွေကို သီတာ မကြားချင်လဲ ကြားရသည်။
မသိချင်ပဲ သိရသည်။ ကျော်ဌေး အပျော်အပါးလိုက်စားသည်တဲ့။ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး သီတာက ဖြောင်းဖျပြောဆိုတော့ သူကရန်လုပ်သည်။ အိမ်ပြန်လာတိုင်းလည်း မူးမူးလာတတ်သည်။ လုပ်သည့်အလုပ်က လိုင်းကား ဒရိုင်ဘာ။ ဝင်ငွေကောင်းတော့ ကျော်ဌေး ပျက်တော့သည်။ ဇနီးမယား သီတာကိုလည်း ကြင်ကြင်နာနာ မရှိသည့် အပြင် ဘာမဟုတ်သည့် ကိစ္စလေးနှင့် ရိုးမယ်ဖွဲ့ ရိုက်လားပုတ်လားလုပ်လာသည်။
သူတို့လင်မယားကို ဘယ်သူကမှ ပေးစားခဲ့တာမဟုတ်။ သူတို့ချင်း ချစ်ကြိုက်၍ ညားခဲ့ကြတာဖြစ်သည်။ တနှစ်လောက်ပဲ အိမ်ထောင်ရေးသုခကို ခံစားရပြီး နောက်ပိုင်း စိတ်ညစ်စရာ၊ သောကရောက်စရာတွေနှင့် ကြုံတွေ့နေရသည်သာမက အသားနာအောင်ပါ ရိုက်နှက်လာတော့ သူမ ကျော်ဌေးကို စိတ်နာလာသည်။ သူမ အနေဖြင့် မယားဝတ္တရားကျေပွန်စွာ သစ္စာရှိရှိ ပေါင်းသင်းလာပေမယ့် ကျော်ဌေးက နှိပ်စက်လာတော့ သီတာမှာ မခံနိုင်တော့သည့်အဆုံး အထုပ်ပိုက်၍ အိမ်ပေါ်မှ ဆင်းလာခဲ့သည်။ အိမ်ပေါ်မှ ဆင်းလာသည်ဆိုရာမှာလည်း တခြားမိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတွေ အိမ်၊ ကိုယ့်ဖက်က ဆွေမျိုးတွေ အိမ်မှာသွားနေလျှင် ရိုးမယ်ဖွဲ့၍ အပြစ်တင် သမုတ်ကာ ကျော်ဌေးက သူ့အပြစ်ကို ကိုယ့်အပြစ် လုပ်နိုင်သေးသည်။
ဒီတော့ သီတာမှာ ကျော်ဌေး၏ အစ်မဖြစ်သူ ညိုမီ၏ အိမ်သို့ ဆင်းလာခဲ့လေသည်။ ညိုမီမှာ လင်မယားနှစ်ယောက်ထဲဘဲရှိပြီး နှစ်ယောက်စလုံးကအလုပ်နှင့်ဆိုတော့ သီတာ ခိုကိုး၍ ရသည်။ ပြီးတော့ ယောင်းမအရင်းဖြစ်ရုံမက ညိုမီနှင့် သီတာတို့က လမ်းထဲတွင် ငယ်ငယ်ထဲက ကစားဖော်ကစားဖက်တွေဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် ညိုမီက သူ့မောင် ကျော်ဌေးအကြောင်းကို ခရေစေ့တွင်းကျသိသည်။ ပြီးတော့ ငယ်သူငယ်ချင်းလည်းဖြစ်၊ ယောင်းမလည်းဖြစ်သူ သီတာ့ဘက်မှ အမြဲနာတတ်သူဖြစ်သည်။
အရင်ထဲက ကျော်ဌေးဆိုးလာလျှင် သီတာ့အား သူမ၏ အိမ်တွင်လာနေရန် ညိုမီက အမြဲခေါ်တတ်သည်။ အခုတော့ သီတာမှာ ညိုမီအိမ်သို့ တကယ်ရောက်လာရပြီဖြစ်သည်။ ကျော်ဌေးက သူ့အစ်မကိုတော့ ငယ်ကြောက်ဖြစ်သည်။ အခု သူ့ဘက်က မမှန်တော့ ညိုမီကို မျက်နှာချင်းမဆိုင်ရဲတာ ကြာပြီဖြစ်သည်။ သီတာအတွက်လည်း ညိုမီတို့အိမ်မှာ အလုံခြုံဆုံးဖြစ်လေသည်။ ထို့အပြင် ညိုမီယောက်ျား ကိုအေးကလည်း နာမည်နဲ့လိုက်အောင် အေးသူဖြစ်၏။ ရုံးတရုံးတွင် စာရေးလုပ်နေသည်။
ညိုမီက ဈေးထဲတွင် ကုန်ခြောက်ဆိုင်ရှိသည်။ သူတို့တွင် သားသမီးကလည်း မရှိလေတော့ သီတာသူတို့အိမ်ရောက်ပြီး ညိုမီမှာ ကူဖော်လောင်ဖက်ရကာ သူတို့အိမ်လေးမှာ စိုစိုပြေပြေလေးဖြစ်လာသည်။ အရင်ကဆိုလျှင် ညိုမီမှာ ညနေဈေးသိမ်း၍ ပြန်လာလျှင် ဟင်းချက်စရာပါတခါထဲ ဝယ်လာပြီး အိမ်ကျတော့ မောမောနှင့် မနားနိုင်။ ချက်ရပြုတ်ရသေးသည်။ ဒါမှ မနက် သူမဈေးထွက်လျှင် ထမင်းချိုင့် အသင့်ဖြစ်နိုင်လို လင်တော်မောင်အတွက်လည်း ထမင်းချိုင့်အသင့်ဖြစ်နိုင်မည်။ တပတ်တွင် ဥပုတ်ရက်တရက်ထဲသာ ဈေးပတ်၍ ထိုနေ့တွင်မှ ညိုမီမှာ လျှော်စရာဖွပ်စရာများကို စု၍ လျှော်ဖွပ်ရလေသည်။
အိမ်ရှင်းဖို့ကတော့ ဝေးရော။ ညိုမီမှာ ဖတ်ဖတ်ကိုမောလေသည်။ အခု သီတာရောက်လာတော့မှ အဆင်ပြေသည်။ ညနေ ညိုမီပြန်လာလျှင် ဟင်းချက်စရာတွေ သူမကို ပေးလိုက်ရုံပင်။ သီတာ သူ့ဖာသာ ချက်သည်။ ညိုမီက ရေချိုးထမင်းစားပြီး နားရုံသာဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် ညိုမီဈေးက ပြန်လာလို့ အိမ်ထဲဝင်လိုက်တာနှင့် ရှုပ်ပွနေသော အိမ်ထဲကိုကြည့်ပြီး အမောဆို့သွားရတတ်သည်။
အခုတော့ တအိမ်လုံး ရှင်းနေရုံသာမက ပစ္စည်းလေးတွေကလည်း သူ့နေရာနှင့်သူ သပ်သပ်ရပ်ရပ်ဖြစ်နေကာ အိမ်လျှာထိုးခင်းလေးတွေမှာလည်း နင်းရက်စရာမရှိအောင် ပြောင်လက်၍နေသည်။ ညိုမီ သီတာ့ကို စိတ်ထဲမှ ကြိတ်ကျေးဇူးတင်နေမိရုံမက နှုတ်မှလည်း ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောမိသည်။ ထိုအခါမျိုးတွင် သီတာက ခပ်ပြုံးပြုံးဖြင့် “မလိုပါဘူး ယောင်းမရာ” ဟုသာ ပြန်ပြောလေ့ရှိသည်။ ဒီနေ့ ညိုမီအိမ်ပြန်ရောက်တော့ ဖိနပ်ချွတ်မှ တန်းတွင် လျှော်ပြီးသား အဝတ်တွေ ပြန့်၍ နေသည်။ ” သီတာရေ.. သီတာ.. ” ” လာပြီ ယောင်းမရေ.. ” သီတာ မီးဖိုထဲမှ ပြေးထွက်လာသည်။ အနားရောက်တော့.. ” ပေး.. ယောင်းမ.. ” ညိုမီ၏ လက်ထဲမှ ဟင်းချက်စရာများထည့်ထားသော ကျွတ်ကျွတ်အိတ်လေးကို လှမ်း၍ ယူသည်။
” ဒီအဝတ်တွေ ညည်း လျှော်ထားတာလား.. ” ” အို.. ယောင်းမကလည်း အိမ်မှာ သီတာပဲရှိတာပဲဟာ.. ” ” မလုပ်နဲ့ သီတာ.. မလုပ်နဲ့.. အဝတ်တွေကို ငါဈေးပိတ်တဲ့နေ့မှ လျှော်ပါ့မယ်အေ.. အဝတ်တွေတော့ မလျှော်ပါနဲ့ဟယ်.. တောင်းပန်ပါတယ်.. ” ” အော်.. ယောင်းမကလည်း အကုန်လျှော်တာမှ မဟုတ်တာ.. နဲနဲပဲ ခွဲလျှော်တာပါဟာ.. ဈေးပိတ်ရက်ကျတော့ ယောင်းမသက်သာတာပေါ့.. ” ပြောလဲပြော သီတာမှာ ကျွတ်ကျွတ်အိတ်လေးကိုဆွဲ၍ မီးဖိုထဲဝင်သွားလေသည်။ ညိုမီကတော့ သီတာ၏ နောက်ကျောကို ကြည့်ရင်း သက်ပြင်းတချချဖြင့် ကျန်ခဲ့လေသည်။
တဖက်ခန်းဆီမှ တချွတ်ချွတ်နှင့် တီးတိုးစကားသံများကြားရသဖြင့် အိပ်မပျော်သေးသော သီတာက နံရံရှိ သံပေါက်ရာ အဟောင်းလေးမှတဆင့် ချောင်းကြည့်မိသည်။ အခန်းထဲတွင် ငါးတိုင်အား မီးလုံးလေးက လင်းလင်းချင်းချင်းဖြစ်နေသည်။ သူမတွေ့လိုက်ရသည်က… ညိုမီက ကုတင်ပေါ်တွင် လက်ထောက်ကာ ဖင်ကြီးကုန်းပေးထားသောကြောင့် နို့ကြီးနှစ်လုံးက တွဲလွဲ လှုပ်ရမ်းနေသည်။ ညိုမီ ဖင်ကြီးနောက်တွင် ဒူးထောက်လျှက် လက်နှစ်ဖက်က ခါးကိုစုံကိုင်ကာ လီးတန်တဝက်ဝင်နေသော စောက်ပတ်ထွားထွားကြီးကို ကိုအေးက စိုက်ကြည့်နေသည်။ လမွေးမဲမဲကြီးများက အုံကောင်းလှပြီး တုတ်ထွားလှသော ကိုအေးလီးကြီးကို သီတာတယောက် တအံ့တသြလေး စူးစိုက်ကြည့်နေမိသည်။
” ဖြေးဖြေးလုပ်နော်.. မောင်.. ” သီတာနားတွေ ထူပူကုန်သည်။ သီတာ အိမ်ထောင်ရှင်တယောက်ဖြစ်သော်လည်း သည်လို တခြားမိန်းမနဲ့ ယောက်ျားတို့ လိုးသော မြင်ကွင်းမျိုး တခါမှ မမြင်ဖူးခဲ့။ ကိုအေးက လီးကြီးကို နဲနဲပြန်ဆွဲထုတ်ကာ ခပ်ဆတ်ဆတ်နှင့် ခပ်ပြင်းပြင်းလေး ဆောင့်လိုးလိုက်ရာ ဗွက်ကနဲ မြည်သံနှင့်အတူ လီးချောင်းကြီးက လျှောကနဲ ဝင်သွားပြီး အရင်းထိ မြှုပ်၍သွားလေသည်။ ” အား.. အား.. ကျွတ်.. ကျွတ်.. ” ညိုမီက သူမ၏ ဖင်ကြီးကို လက်တဖက်ဖြင့် နောက်ပြန်ပွတ်ရင်း ညီးညူလိုက်သံမှာ နာလို့လား ကောင်းလို့လား သီတာ မဝေခွဲတတ်။
အဆုံးထိဝင်နေသော လီးကြီးကို ပြန်မဆွဲထုတ်ပဲ သူမ၏ ဖင်ကြီးတွေကို ဆုပ်နယ်ရင်း ဖင်ကို စကောဝိုင်း ဝိုင်းသလို အထက်အောက်ဝဲယာယမ်းပေးသည်။ ထိုအခါ လီးကြီးက ညိုမီစောက်ခေါင်းထဲတွင် ပတ်လည်မွှေ့နေရော့မည်။ ထို့ပြင် လီးက ဖိကပ်ထားတော့ စောက်ဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားပတ်လည်ကိုရော စောက်ဖုတ်အုံကို ပွတ်တိုက်နေလေတော့ ညိုမီမှာ ဖင်ကြီးတွေ တလှုပ်လှုပ်ဖြစ်လာနေသည်။ ” မောင်.. မောင်ရယ်.. အ.. ဟင်း.. ” ညိုမီက မပီမသလေးငြီးရင်း မျက်နှာလေးကို ဟိုဖက်ဒီဖက် စောင်းသွားသည်။
ကိုအေးက ညိုမီ၏ ခါးကျင်ကျင်လေးကို ပြောင်းကာ ဆုတ်ကိုင်ရင်း သူ၏ ပြောင်လက်နေသော လီးချောင်းကြီးကို ညိုမီစောက်ပတ်ထဲသို့ ပက်ကျိသွားနှုန်းဖြင့် ဆွဲထုတ်လာနေသည်။ သီတာတယောက်ဘာမှ သတိမရဘဲ ဆက်လက်ချောင်းနေမိရာ အကြောပြိုင်းပြိုင်းထနေပြီး သန်မာတုတ်ခိုင်လှသည့် လီးကြီးကို မြင်လိုက်ပြီဆိုကတည်းက ကြက်သီးမွေးညှင်းများထကာ တဖျင်းဖျင်းခံစားလာရသည်။ စောက်ပတ်ထဲမှ အရည်ကြည်လေးများစိမ့်ထွက်ကုန်သည်။ ” အ.. အီး.. ဟင်း.. ဟင်း.. ” အသံလေးက တိုးတိုးလေးပဲ ဖြစ်သည်။
သို့သော် သီတာ ကောင်းကောင်းကြားနေရသည်။ သီတာ၏ ခြေတွေ လက်တွေ အေးစက်လာသည်။ နှလုံးခုန်နှုန်းပါမြန်လာသည်မို့ ကိုယ်ပါရောပြီး အလိုလိုမောလာသည်။ နထင်စပ်မှာ ချွေးသီးလေးများ စို့လာကာ အာခေါင်တွေခြောက်လာပြီး တံထွေးလေးမျိုလိုက်ရသည်။ ” ဗြွတ်.. ဘွတ်.. ” ” အ. ရှီး.. ကျွတ်.. ကျွတ်.. ” ချောင်းကြည့်နေသော သီတာမှာ အသားတွေ တဆတ်ဆတ်တုန်လာသည်။ ဒူးတွေက ကွေးညွှတ်ချင်နေပြီ။
ရုတ်တရက် သူမ၏ အောက်နှုတ်ခမ်းကို ကိုက်ကာ စောက်ဖုတ်ကို ယောင်ယမ်းပြီး စမ်းလိုက်မိသည်။ သီတာက လက်ညှိုးကို စောက်ခေါင်းထဲ သွင်းကာ ထိုးမွှေကလိနေမိသည်။ လက်မလေးကလည်း စောက်စေ့လေးကို ပွတ်ချေကစားနေမိသည်။ ” အင့်.. အင့်.. အ.. အ.. ” ” ပြွတ်.. ဗြစ်.. ပြွတ်.. ” ကိုအေးက မီးကုန်ယမ်းကုန်တလစပ်ဆောင့်နေလေရာ ဂွေးစိတွဲတွဲကြီးများက ညိုမီဆီးခုံအထိ ကော့ကော့ပြီး ဖျောက်ကနဲ ဖတ်ကနဲ ရိုက်သည်။
ပြွတ်ကနဲ ပြစ်ကနဲ အသံလေးတွေက သုံးလေးချက် ဆောင့်မှ တခါထွက်ပေါ်လာတတ်သည်။ ကိုအေးက ညိုမီကို စိတ်ရှိလက်ရှိလိုးဆော် နေသည်ကို မြင်သောအခါ သီတာမှာ သူမ၏ လက်ညိုးကို စောက်ခေါင်းလေးထဲသို့ အတင်းပင် ထိုးမွှေပေးလိုက်မိသည်။ ကိုအေးမှာ ညိုမီ၏ နို့အစုံကို အားရပါးရဆွဲလိုက်၊ ဖင်သားကြီးတွေကို ဆုတ်နယ်လိုက်နှင့် အလုပ်ရှုပ်နေသည်။ ကိုအေး ဆောင့်လိုးသည့် အရှိန်ပြင်းထန်လာလေ သီတာ၏ လက်ညိုးလေးကလည်း ကြမ်းလာလေဖြစ်သည်။
ကာမမီးလောင်မြိုက်မှုကြောင့် သီတာ့ခမျာ မရှုမလှ လူးလူးလွန့်လွန့်ဖြစ်လျက် နှုတ်မှပင် မပီဝိုးတဝါး အသံလေးများ ခပ်သဲ့သဲ့ထွက်ကာ ညီးညူနေမိသည်။ ညိုမီက ကုတင်ဘောင်ကို လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် တင်းတင်းဆုတ်ပြီး မျက်လုံးလေးတွေမှိတ်ကာ နှုတ်ခမ်းလေးများကို ကိုက်လျှက် ခေါင်းလေးမော့ကာ မော့ကာ ခံနေရရှာသည်။ နှုတ်ခမ်းလေးစေ့ထားသည့်ကြားမှ လည်ချောင်းသံတအင့်အင့်က ဆောင့်ဆောင့်ထွက်လာသည်။ သီတာတယောက် သူမရှေ့မှ မြင်ကွင်းကို အာသာငမ်းငမ်း ကြည့်နေလေသည်။
ကိုအေးက အဆက်မပြတ်ဆောင့်လိုးနေခိုက်မှာပင် ညိုမီက ဖင်ကြီးကို နောက်သို့ စည်းချက်ဝါးချက်ကျကျလေး ပြန်ဆောင့်ပေးနေလေသည်။ ” အား.. ရှီး.. ကောင်းလိုက်တာ.. မောင်ရယ်.. ” ညိုမီက မျက်တောင်လေးမှေးပြီး အစ်တစ်တစ်အသံလေးနှင့် ပြောလိုက်သံကို ကြားလိုက်ရသောအခါ သူမမှာ ညိုမီကို နေရင်းထိုင်ရင်း မနာလိုဖြစ်မိလေသည်။ ကိုအေးက လက်မောင်းကြောကြီးတွေ ထောင်ထလာအောင် ညိုမီ ဖင်ကြီးကို ဖျစ်ညှစ်ရင်း လီးချောင်းကြီးကို အဆုံးထိ ပစ်ဆောင့်လိုက်ပြီး လီးကြီးကို စောက်ပတ်ထဲ အတင်းဖိကပ် ကိုအေး၏ ကိုယ်ကြီးသည် တဆတ်ဆတ်ဖြစ်သွားလေသည်။ သီတာတယောက် အိပ်ရာထက်ဝယ် တကိုယ်တည်းလှဲရင်း အိပ်ပျော်ဖို့ကြိုးစားနေမိသည်။
သီတာ မျက်လုံးမှိတ်လိုက်တိုင်း ကိုအေး၏ သံချောင်းကြီးအလား မာကျောတင်းထနေသော အားရစရာ ကောင်းလှသည့် လီးတန်ကြီးကသာ အရိပ်ထင်နေလေသည်။ သူမ၏ ရင်ထဲတွင်မတော့ ကိုအေးသည် ထွားကြိုင်းလှသည့် လီးကြီးကို ပိုင်ဆိုင်ထားသည့် အားကောင်းမောင်းသန်ယောက်ျားတဦးပါလားဟုသာ ရင်တုန်ပန်းတုန်လေး တွေးမိလိုက်လေတော့သည်။ နေ့လည်ဘက် အဝတ်လျှော်ရန်အတွက် သီတာမှာ ထမီရင်လျားလေးဖြင့် ညိုမီတို့ အိပ်ခန်းထဲသို့ အဝတ်ဟောင်းတွေကိုယူရန်ဝင်ခဲ့ရာ ကိုအေးနှင့် ပက်ပင်းတိုးတော့သည်။ ” အော်.. ဒီနေ့ အကို ရုံးပိတ်တာပဲ.. ” ” အဝတ်တွေ မလျှော်ပါနဲ့ဟာ.. ညိုမီအားတဲ့ရက်ကျမှ လျှော်မှာပေါ့ ” ကိုအေးက အားနာစွာဖြင့် ပြောသည်။ ” ရပါတယ်.. အကိုကလဲ.. သီတာ အားနေတာပဲဟာ.. ” တားနေသည့်ကြားမှ သီတာမှာ ထမီရင်လျားလေးဖြင့် အခန်းထဲမှ အဝတ်တွေကို ယူသည်။
ထမီလေးကို ကျစ်ကျစ်လစ်လစ်လေး ရင်လျားထားသည့် သီတာအား ကိုအေးက စိုက်၍ ကြည့်နေမိသည်။ သီတာ၏ ကိုယ်လုံးကိုယ်ထည်မှာ ညိုမီထက် နဲနဲလေးပို၍ မို့ထွားပြီး အသားအရည်မှာ ညိုမီထက် ပိုတင်းမာကျစ်လစ်လိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်း ကိုအေး မြင်ရုံဖြင့် အကဲခတ်မိသည်။ ဘာအခုအခံမှ မပါသဖြင့် အရှိကို အရှိအတိုင်း အဖုအထစ် အမို့အမောက်တွေက ထင်ရှားနေသည်။ အောက်ပိုင်းတွင်လည်း အောက်ခံပင်တီ ဝတ်မထားပဲ ရင်လျားထားသော ပြောင်အနက်ထမီလေးအောက်မှ ဖြောင့်စင်းလုံးတစ်သော ပေါင်တန်ရှည်ကြီးများနှင့် ကြီးမားလှုပ်ခါယမ်းသွားသော တင်သားအစုံကလည်း မက်မောစရာကြီးဖြစ်နေသည်။
လက်ပွန်းတတီး အနေများလာတော့လည်း ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်များက ဆွဲဆောင်မှုရှိလာသည်မို့ တောင့်သော ဖြောင့်သော လှသော သီတာကို ကိုအေး စိတ်မဝင်စားဘဲ မနေနိုင်တော့ပေ။ အဝတ်များယူပြီး ပြန်၍လှည့်အထွက် သူမကို စိုက်ကြည့်နေသော ကိုအေး၏ မျက်လုံးများကို ရင်ဆိုင်မိကာ သီတာမှာ ရင်တွေတဒိတ်ဒိတ်ခုန်သွားရသေးသည်။ ကိုအေးနှင့် ညိုမီတို့ လင်မယားနှစ်ယောက်မှာ ပိတ်ရက်ခြင်းမတူကြပေ။
ကိုအေးမှာ ရုံးဝန်ထမ်းဖြစ်၍ စနေ၊ တနင်္ဂနွေနေ့များတွင် အလုပ်နားရသည်။ ညိုမီကတော့ ဈေးပိတ်ရက်ဖြစ်သော ဥပုသ်နေ့တွင်မှ နားရလေသည်။ ကိုအေးမှာ များသောအားဖြင့် ရုံးပိတ်ရက်တွင် မနက်စာစားပြီးသည်နှင့် တနေကုန် အပြင်သို့ ထွက်နေတတ်သည်။ ညနေစောင်းတော့မှ ညိုမီနှင့်အတူ အိမ်သို့ပြန်လာလေ့ရှိသည်။ ဒီတပတ်ရုံးပိတ်ရက်တွင်တော့ ကိုအေးမှာ အပြင်သို့မထွက်ဘဲ အိမ်တွင်မြဲနေသည်။ ကိုအေးတယောက် အခုတော့ ဂနာမငြိမ်ဖြစ်နေမိသည်။ ဒီအိမ်လေးထဲမှာ သူနှင့် သီတာ နှစ်ယောက်တည်း။ စားရမှာလဲ သဲနဲ့တရှပ်ရှပ်၊ လွှတ်ပေးလိုက်ရမှာလဲ အဆီတဝင်းဝင်းဖြစ်နေသည်။ ရေချိုးခန်းအနား သွားချောင်းနားထောင်လိုက်ခါမှ ပိုစိတ်လှုပ်ရှားလာရသည်။ တဗြန်းဗြန်းရေချိုးနေသော သီတာလေးကို မျက်လုံးထဲမြင်ယောင်ကြည့်မိသည်။ သီတာ၏ ခရာတာတာ မျက်နှာပေးလေးကို မြင်မိရင်း ကိုအေး အချစ်စိတ်တွေ လှိုင်းထလာရတော့သည်။ ရေချိုးခန်းတံခါးကို အမှတ်တမဲ့ကြည့်မိတော့ ဂျက်ထိုးထားဟန်မတူ။
ဟတတလေးဖြစ်လို့နေရာ ကိုအေး စိတ်ထဲ သေချာပြီဟု တွက်လိုက်တော့သည်။ ဒီလောက် အထာပေးနေမှတော့ သီတာလေးကို ချန်ထားလို့မဖြစ်တော့ပြီ။ ” ကျွီ ” ” အို.. အို.. အကိုအေး.. ” ဂျက်ထိုးမထားသော ရေချိုးခန်းတံခါးက ရုတ်တရက် ပွင့်သွားပြီး ကိုအေးက ရေချိုးခန်းလေးထဲ ဝင်လာသည်။ ကိုအေးက အပေါ်ပိုင်းကို ဗလာကျင်းထားရာပြီး ခါးတွင်သာ ပုဆိုးဝတ်ထားရာ မို့မောက်ကျစ်လစ်သော ရင်အုပ်ကြီးကို ကြည့်ရင်း သီတာရင်တွေခုန်နေမိသည်။ အံကြိတ်ကာ မာန်ထနေရင်း တံထွေးမျိုချလိုက်သော ကိုအေးကိုမြင်မိတော့မှ ကြက်သီးတဖြန်းဖြန်းထသွားသည်။
ကိုအေးကတော့ ရေပန်းအောက်မှ သီတာ့ကို ဇွတ်တရွတ် အနမ်းတွေပေးလေတော့သည်။ ကိုအေး၏ ထူထဲသော နှုတ်ခမ်းထူကြီးတွေက သူမ၏ နီတျာရဲနှုတ်ခမ်းလေးကို ဆွဲစုပ်နမ်းနေသည်။ တဖန် လျှာဖျားလေးဖြင့် သူမ၏ လျှာဖျားလေးကို တွေ့ထိကလိပေးနေသည့်အပြင် သူ၏ လက်နှစ်ဖက်ကလဲ သီတာ၏ ကိုယ်ပေါ်ရှိ ကာမခလုတ်တို့ကို တရွရွပွတ်သပ်ပေးသည်။ သီတာ့ခမျာ ကိုအေး၏ သန်မာသော လက်မောင်းကြီးဖြင့် ရစ်ပတ်ထားသည်မို့ မလူးသာမလွန့်သာ ဆန္ဒရမ္မက်တို့ လွှမ်းနေပြီမို့ သီတာ့မှာ မငြင်းဆန်သာတော့ပဲ သူမ၏ လက်ချောင်းလေးများဖြင့် ကိုအေး၏ ဦးခေါင်းမှ ဆံပင်များကို ထိုးဖွပေးနေလေသည်။
ရေပန်းအောက်ထဲ အတန်ကြာ နမ်းနေ ကိုင်နေပြီးနောက် ကိုအေးသည် သီတာ့ကို လွှတ်ပေးလိုက်သည်။ ရေစိုထမီလေးကို အနည်းငယ်လျှော့ချပြီး ရေစက်ရေပေါက်လေးများတွဲခိုနေသော သီတာ့နို့လေးနှစ်လုံးကို ကိုအေး ချိုမြိန်စွာ စို့သည်။ သီတာ့ခမျာ လက်တဖက်က ထမီလေးကို ထိန်းထားရင်း ကျန်လက်တဖက်နှင့် ကိုအေးကျောပြင်ကြီးကို သိုင်းဖက်ထားမိတော့သည်။ ကိုအေးက ပုဆိုးကို ဘယ်တုန်းက ချွတ်ချလိုက်မှန်းမသိဘဲ သူ့လီးချောင်းကြီးက သီတာ့ စောက်ဖုတ်အုံတဝိုက်မှာ ဟိုထိုး သည်ထောက်နှင့်။ ရေလဲထမီလေးခံနေလို့သာ တော် တော့သည်။
အထိအတွေ့မရှိတာကြာပြီမို့ သီတာတကိုယ်လုံး တုန်ရီနေသည်။ ဒူးများညွတ်ကျချင်လာသည်။ ကိုအေးလက်ကြီးများက ရေစိုထမီလေးအောက်မှ ထွားကြိုင်းဖုထစ်နေသော တင်ပါးကြီးများကို ဖျစ်ညှစ်နေသည်။ ” သီတာ ” တိတ်တဆိတ်မှုကို ဖြိုခွင်း၍ ကိုအေးကခေါ်လိုက်သည်။ ” ရှင်.. ” ” ဟိုဘက် လှည့်လိုက်ပါလားကွယ် ” ” အင်း.. အာ.. အကိုကလည်း ဘာကြီးမှန်းလဲ မသိဘူး.. ” သီတာက မျက်နှာလေး ရဲသွားရာမှ မျက်စောင်းလေးထိုးပြီး ပြောလိုက်ပုံလေးမှာ ဆွဲနမ်းပစ်ချင်စရာ ကောင်းလှသည်။ သီတာ့ရင်ထဲလှိုက်ဖိုပူထူပြီး ကိုအေးကို ကျောခိုင်းရင်းလှည့်လိုက်သည်။
” အကို သီတာ့ကို ချစ်ပါရစေ ” ” အကိုရယ် မသင့်တော်ပါဘူး.. ယောင်းမသိသွားရင် မကောင်းဘူး.. ” ပါးစပ်မှငြင်းပယ်နေပေမယ့် ကိုအေးက သီတာကို အနောက်မှ သိုင်းဖက်ရင်း ထမီလေးကို ဖြေချလိုက်သည်။ ဖြူဝင်းနေသော သီတာ့ဖင်အိုးကြီးက ကိုအေးကို ရင်သက်ရှူမောသွားစေသည်။ ” အကိုကလဲ အဟင့် … ဘာလို့ အကြာကြီး စိုက်ကြည့်နေရတာလဲ… လုပ်မဲ့ဟာကို မလုပ်သေးပဲနဲ့ ” သီတာက နံရံကို တံတောင်လေးနှင့်ထောက်ရင်း ကိုအေးရှေ့ဝယ် ဖင်ကြီးကို ပိုကော့ကာ နောက်သို့ ပစ်ပေးလိုက်သည်။ စောက်ဖုတ်လေးက ဖင်ကြားမှ အနောက်သို့ အုံလိုက် ပြူးထွက်လာသည်။
ချွဲတဲတဲနှာသံလေးနှင့် တီးတိုးပြောလိုက်သော သီတာ့စကားကိုကြားမှ ကိုအေးက ဖင်ကြီးနောက်နားသို့ တိုးကပ်ရင်း လီးကြီးကို စောက်ပတ်အဝတွင် တေ့ဖို့ကြိုးစားတော့သည်။ သီတာက သူမ၏ ကြီးမားလှသော တင်ပါးကြီးနှစ်လုံးကို ဘယ်ညာယိမ်းနွဲ့ရင်း ဆော့ကစားနေရာ တောင်နေသော ကိုအေး၏ လီးတန်ကြီးနှင့် သီတာ၏ စောက်ဖုတ်လေးမှာ မထိတထိဖြင့် ယမ်းခါနေသည်။ တချက်တချက် သီတာက ကိုအေး၏ လီးကြီးကို စောက်ပတ်အောက်သို့ လျှိုသွင်းထားပြီး ပေါင်နှစ်လုံးနှင့် ညှပ်ခါ ရှေ့တိုးနောက်ဆုတ်လုပ်နေသဖြင့် လီးကြီးမှာ မချင့်မရဲကြီးဖြစ်လာပြီး ကိုအေးမှာ ရှူးရှူးရှဲရှဲအသံတွေ ထွက်လာသည်။
” ခစ်.. ခစ်.. ခစ် မာန်ထလာပြီ.. ခစ်ခစ်.. ” ကိုအေးက လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် သီတာ၏ ဖင်ကြီးတွေကို ကိုင်ရင်း လီးနှင့်စောက်ပတ် တဲ့တဲ့ဖြစ်စေရန် ကြိုးစားရင်း နှာမှုတ်သံကြီးက ပြင်းထန်၍ လာသည်။ သီတာက သဘောကျပြီး တခစ်ခစ်ရယ်နေလေသည်။ ” သီတာ့ ဖင်ကြီးကို ငြိမ်ငြိမ်ထားကွာ ” ” အိုး.. ဝင်အောင်လုပ်ပေါ့လို့ ခစ် ခစ်.. ” သီတာက ဆော့ကစားနည်းတခုလို့ပင် သတ်မှတ်နေသလားမသိပါ။ ကိုအေးကို ပြောင်စပ်စပ်ပြောရင်း လီးတန်ကြီးကို စောက်ပတ်ဝသို့မဝင်အောင် နိမ့်ချီမြင့်ချီ ဘယ်ညာရမ်းခါ၍ ရှောင်တိမ်းနေရာ ကိုအေးကျွဲမြီးတိုလာသည်။
ခပ်ဖွဖွကိုင်ထားသော သီတာ့ခါးသေးသေးလေးကို သူ့လက်ကြီးဖြင့် တင်းကြပ်စွာ စုံကိုင်၍ ယမ်းခါနေသော ဖင်ကြီးကို ထိန်းချုပ်လျှက် ဖင်ကြားထဲမှ နောက်သို့ပြူးထွက်နေသော စောက်ဖုတ်အုံကြီးကြားသို့ လီးထိပ်ကြီးကို မရမက သွတ်သွင်းလိုက်လေသည်။ ” ပြွတ် .. ဗြစ် .. ” ” အ.. အာ့ .. ကျွတ် ကျွတ် အကိုကလဲ တအားပဲ.. ” ” ညည်းက ငြိမ်ငြိမ်မှ မနေတာ ” ” ချစ်လို့ကျီစားတာပဲ ဟာကို.. ” ” သီတာ့ စောက်ပတ်လေးက ကျပ်လိုက်တာကွာ.. စီးပိုင်နေတာပဲ ” ” အ.. ဟင့်.. အစ်ကိုကလဲ ထန်သလား မမေးနဲ့ အ.. အား.. ကျွတ်.. ကျွတ်.. ကျွတ်.. အဝင်ကြမ်းတယ်ကွာ.. အစ်ကို့လီးထိပ်ဖူးကြီးက တော်တော်မာတာပဲ ရှီး.. ” ” ဗြစ်.. ပလစ်.. ဗြစ်.. ဗြစ်.. ”
” ဟား အား ရှည်လိုက်တာ အကိုရာ အကို့ဟာကြီးက မဆုံးသေးဘူးလား .. အိုး.. အိုး.. ကျွတ် ကျွတ်.. လည်ပင်းမှာတောင် တစ်ဆို့ဆို့ကြီးဖြစ်လာပြီကွာ.. ” ” အဆုံးဝင်လားဟင် သီတာ ” ” အိ.. အ.. ဝင်တယ်.. ဝင်တယ်.. အဆုံး..ပဲ.. အိ.. အ.. ” သီတာ ဖင်ကြီးကို မယမ်းနိုင်တော့၊ မဆော့နိုင်တော့ချေ။ ” ထွက်.. ထွက်ကုန်ပြီ ကိုကို.. အ.. အ.. ” စောက်ခေါင်းအတွင်း နွေးထွေးစွာ ဝင်ရောက်သွားသော လီးတန်ကြီး၏ အထိအတွေ့က ဆန်းပြားချိုအီလှသည်။ သွေးသားဆူဖြိုးတုန်းအရွယ်မှာ လီးနှင့်ဝေးနေရတာ ကြာပြီမို့ သီတာတယောက် ဟန်ပင်မဆောင်နိုင်တော့။ ဘယ်နှချက်မှတောင် ဆောင့်လိုးတာမခံရသေး၊ လီးကြီးက တင်းတင်းကြပ်ကြပ်တိုးဝင် ပြန်ထွက်နေဆဲမှာပင် တချီပြီးသွားရရှာလေသည်။
သီတာ.. အထဲ သွားကြရအောင်လား.. ” ” ဟင့်အင်း.. ဒီမှာပဲ နေကြရအောင်လားကွယ်.. နော်.. ” ကိုအေးမှာ ဘာမှထပ်မပြောတော့ဘဲ သီတာ့ကိုယ်လုံးလေးကို စွေ့ကနဲ မချီကာ သူတို့အိပ်ခန်းထဲသို့ ပွေ့သွားပါတော့သည်။ ” ဘယ်ကို သွားမလို့လဲဟင်.. ” ” ကိုယ်တို့ ကုတင်ပေါ်ကိုပေါ့ ” ” အင်.. သူတို့လင်မယားလိုးတဲ့နေရာကြီးမှာ.. မကြိုက်ပါဘူး.. ” သီတာက ကိုအေး၏ လည်ပင်းကို ဟီးလေးခိုရင်း မျက်စောင်းလေးထိုးကာ နှုတ်ခမ်းလေးကို စူတူတူလေးလုပ်၍ ပြောသည်။ သီတာ၏ အပြောနွဲ့နွဲ့ တိုးတိုးလေးနှင့် အပြုံးနုနုချွဲချွဲလေးများသည် ကိုအေးကို တင်းတင်းကြီးရစ်ပတ်နှောင်ဖွဲ့မိလေသည်။
သီတာယောက် သူမချောင်းကြည့်ခဲ့သည့် ကိုအေးတို့လင်မယား၏ ကုတင်ပေါ်တင်ဝယ် ပယ်ပယ်နယ်နယ် အလိုးခံနေရလေပြီ။ ဖြူဝင်းအိစက်သော စောက်ပတ်ဖွေးဖွေးလေးထဲသို့ ညိုမဲပြောင်တင်းနေသော လီးတန်ကြီးက ဇိကနဲ ဇိကနဲ ဆောင့်ဝင်နေလေသည်။ သီတာကလည်း မခေပါ။ အောက်မှနေ၍ ကိုအေးကို တင်းကြပ်စွာဖက်ထားရင်း အပေါ်မှ လိုးဆောင့်ချက်များနှင့်အညီ အချက်ကျကျဖြင့် သူမ၏ ဖင်ကြီးကို ကော့ပေးနေသည့်အပြင် လိုးသည့်သူပိုကောင်းစေရန်အတွက် သူမ၏ ဖြူဖွေးကြီးမားလှသော ဖင်ကြီးကို စကောဝိုင်း ဝိုင်း၍ ပေးရင်း စောက်ပတ်ထဲရှိကြွက်သားများဖြင့် လီးကြီးကို တအား တအား ညှစ်ပေးနေပြန်သည်။
ကိုအေးမှာ ဖောင်းဖောင်းအိအိ ကျဉ်းကျဉ်းကြပ်ကြပ် သီတာ့ စောက်ပတ်လေးကို လိုးနေရခြင်းမှာ ထူးကဲလှသည့် အရသာမို့ သူမကို အစွဲကြီးစွဲသွားလေတော့သည်။ သီတာ့ခမျာ သူမကိုယ်ပေါ်၌ ကြီးမားသော ကိုယ်လုံးကြီးနှင့်ဖိထားရင်း အချက်မှန်မှန်ဖြင့် အင်တိုက်အားတိုက် လိုးဆော်နေသည့် ဒဏ်ကြောင့် အသက်ရှူပါကြပ်၍ မချိမဆန့်ခံစားနေရသည်။ ” ကိုကိုရယ်.. နဲနဲ လျှော့ပါအုံး.. သူ သိပ်ထန်တာပဲ.. ” ” ကောင်းရဲ့လား.. သီတာ ” ” ကောင်းလွန်းလို့.. အသဲကို ခိုက်သွားတာပဲ ကိုရယ်.. အား ဟင့် ဟင့်.. ” ကိုအေးသည် သီတာ့အပေါ်ဖိကပ်ထားသော ကိုယ်လုံးကြီးကို အနည်းငယ်ကြွပြီး သူ့လက်နှစ်ဖက်ကို သီတာ့ဘေးတဖက်တချက်စီတွင် ထောက်ကာ အားပါးတရ ဆက်လိုးဆောင့်လေသည်။
သီတာက ကိုအေး၏ နဖူးမှ ချွေးစလေးများကို လက်ဖဝါးလေးဖြင့် လှမ်းသုတ်ပေးလိုက်သည်။ ” ဒီပုံက အားမရချင်တော့ဘူး သီတာရာ.. ပုံစံပြောင်းရအောင်နော် ” ” ကိုကို့ သဘောပဲ.. ” ကိုအေးက ဆောင့်တာကို ရပ်လိုက်ပြီး သူမ၏ ကိုယ်ပေါ်မှ လှိမ့်ဆင်းလိုက်သည်။ ပြီးတော့ ကုတင်အောက်သို့ ဆင်းလိုက်သည်။ သီတာ့ကို ကုတင်စောင်းသို့ရောက်အောင် ရွှေ့ယူလိုက်သည်။ သီတာ၏ ဖင်ကြီးမှာ ကုတင်စောင်းသို့ရောက်သွားသောအခါ သူမ၏ ခါးအောက်သို့ ခေါင်းအုံးတလုံးထိုးထဲ့ကာ ခုလိုက်သည်။
သီတာ၏ စောက်ဖုတ်ကြီးက မို့မောက်တက်လာသည်။ ကိုအေးက ကုတင်စောင်းဝယ်တွဲလောင်းကျနေသော သူမ၏ ပေါင်တန်နှစ်ဖက်အား အလိုက်သင့် ကားစေလိုက်ပြီးလျှင် စောက်ဖုတ်အကွဲကြောင်းတလျှောက် လီးတန်ကြီးဖြင့် စုန်ဆန် လျှောတိုက်ပေးလိုက်သည်။ သီတာ၏ နို့သီးခေါင်းလေးဆီသို့လည်း လက်လှမ်းကာ နို့သီးလေးတွေကို လက်ညှိုးလက်မတို့ဖြင့် ညှပ်ကာ ညင်ညင်သာသာလေး ပွတ်ချေပေးလိုက်ပြန်သည်။ ” အ.. ကို.. ကို.. ဟင့်.. ဟင့်.. အို.. လုပ်မှာလုပ်ကွာ.. အချိန်မရှိဘူး.. ” စောက်ပတ်အကွဲကြောင်းတလျှောက် လီးထိပ်ကြီးဖြင့် အပွတ်ခံနေရသဖြင့် သီတာ စိတ်တွေ မချိမဆန့် ထလာပြီး ဖင်တကြွကြွဖြစ်နေတော့သည်။ ” ဘာလဲဟင်.. သီတာ ” ” ကျမ..ကျမ မနေနိုင်တော့ဘူး.. ဟင့်..ဟင့်.. ” ” ကို ဘာလုပ်ပေးရမလဲဟင် ” ကိုအေးက စောက်ပတ်အဝတွင် လီးကြီးကိုတေ့ထားရင်း နို့သီးခေါင်းလေးတွေကို ချေမွမြဲ ချေမွလျက်မေးသည်။
” ယား..ယားလှပြီကွယ်.. လိုး..လိုးပါတော့.. အင့် ဟင့်.. ” ကိုအေး၏ အချော့အမြူနှင့် ကျွမ်းကျင်ညင်သာစွာ နှိုးဆွပေးနေမှုကြောင့် ကာမအရသာကို မခံချိမခံသာ ခံစားနေရသည့် ဝေဒနာအတွက် မပီမသဝိုးတဝါးနှာသံဖြင့် အာသာရမ္မကပြေစေသောဌာ သီတာတယောက် အငမ်းမရတောင်းဆိုနေမိတော့သည်။ ထိုသို့ ငြီးငြူနေရင်း သီတာ့ ဖင်ကြီးများမှာ ဘယ်ညာယမ်းခါလျက် လှုပ်ရှားနေသေးသည်။ ကိုအေး၏ သွေးသားများကလည်း ကြွသထက် ကြွလာသည်။ သူ၏ တောင်နေသော လီးကြီးက တဆတ်ဆတ် ဖြစ်လို့နေသည်။
ထို့ကြောင့် နှိုးဆွမှုကို ရပ်လိုက်ပြီး အကြောကြီးများ ထောင်ထသည်အထိ တောင့်တင်းမာကျောနေသော လီးချောင်းကြီး၏ တငေါက်ငေါက်ဖြစ်နေသော လီးထိပ်ကြီးကို စိုရွှဲနီရဲလျှက်ရှိသော စောက်ပတ်လေးထဲသို့ ဆောင့်သွင်းလိုက်တော့သည်။ ” ဗြွတ်.. ပလွတ်.. ဒုတ်.. ဒုတ်.. ” ” အမေ့.. ကျွတ်.. ကျွတ်.. ” ” နာသွားလား သီတာ ” ကိုအေးက လီးကစိမ်ထားပြီးမေးသည်။ ” ဟင့်အင်း..ဟင့်အင်း.. မနာဘူး.. ကိုကို.. ဆောင့်.. ဆောင့်..ဆောင့်ပါ.. တအားဆောင့်ပေးပါ.. ” သီတာမှာ စောက်ခေါင်းထဲ လီးကြီး မတန်တဆတိုးဝင်သွားပြီး သားအိမ်ခေါင်းကို ထိုးဆောင့်မိသဖြင့် နာကျင်နေသော်လည်း ကောင်းမွန်သည့် ကာမအရသာကို တင်းပြည့်ကျပ်ပြည့် ခံစားရနိုင်ရေးအတွက် အငမ်းမရ ကမန်းကတန်း ပြန်ဖြေရှာသည်။ ” ပြွတ်.. ဖွတ်.. စွပ်.. စွပ်.. ဖွတ်.. ဖွတ်.. ” ” အား.. ဟား.. ကောင်းလိုက်တာနော်.. ဟင်း.. ဟင်း.. ” ” ပြွတ်.. စွပ်.. ပြတ်.. ပြွတ်.. ပလွတ်.. ” ” အင့်.. ဟုတ်ပြီ.. ဆောင့်..ဆောင့်.. ” ကိုအေးက ပုံစံအမျိုးမျိုးအနက် ယခုလို စီးစီးပိုင်ပိုင်နှင့် လီးတဆုံးဝင်သော ကုတင်စောင်းနည်းကို အကြိုက်ဆုံးဖြစ်သည်။
လီးတချောင်းလုံး အစမှ အဆုံးတိုင် စောက်ခေါင်းထဲ ပွတ်တိုက်နေသည့်အတွက် ခံရသူ မိန်းမသားကို ပိုအရသာတွေ့စေသလို ကုတင်အောက်မှ မတ်တပ်ရပ် ဆောင့်ရသည့်အတွက် လိုးရသူ ယောက်ျားမှာလည်း လွတ်လွတ်လပ်လပ်ဖြင့် စိတ်ထင်တိုင်း ဆောင့်နိုင် ကြမ်းနိုင်လေသည်။ ” ပြွတ်.. ပြွတ်.. စွတ်.. ဖွတ်.. ဖွတ်.. အမလေး.. ကိုရယ်.. ကောင်းလိုက်တာ.. ရှင့်ကိုတော့ တသက်စွဲပြီ..ရှင့်.. ” နှစ်ယောက်စလုံး ကာမအရှိန်က တက်၍လာလေပြီ။ လိုးဆောင့်ရသည့် အရှိန်ကလည်း အားပါးတရရှိလှပါသည်။ လိုးဆော်နေသည့်ကြားမှ သူမ၏ နှုတ်ခမ်းလေးများကို ရွရွလေးနမ်းလိုက်၊ နို့သီးခေါင်းလေးနှစ်ခုအား ဘယ်ပြန်ညာပြန်စုပ်လိုက်ခဲလိုက် လုပ်ပေးနေပါသေးသည်။ ” စွပ်.. ပြွတ်.. ဖွတ်.. ဖွတ်.. ဖွတ်.. ” ” အို.. အို.. ကိုကိုရယ်.. ကောင်း..ကောင်း..ကောင်းလိုက်တာ.. ဟင့်.. ဟင့်.. ဆောင့်.. ဆောင့်.. ပြီးတော့မယ်.. အ.. အာ့.. အင်း.. ” သီတာ ညီးညူရင်း ခြေဖျားကလေးများ ကွေးလိုက် စန့်လိုက် ဖြစ်သွားပါသည်။
ထို့အပြင် ကိုအေး၏ ကျောပြင်ကျယ်ကြီးကို လွတ်ထွက်သွားမည် စိုးသည့်အလား တအားဖက်ထားရင်း ကာမအထွတ်အထိပ်သို့ ရောက်သွားလေသည်။ သူမ၏ လင်ယောက်ျားနဲ့ပင် တချီကောင်းလောက်သာ ခံဖူးသော သီတာတယောက် ကိုအေး လိုးတာကို ခံရတော့မှ တသက်နှင့်တကိုယ် ဆက်တိုက်ပြီးတဲ့ အရသာကို တုန်ခါ မောဟိုက်စွာ ခံစားနေရတော့သည်။ ” သီတာ ပြီးသွားပြီလားဟင် ” ” သွားပါ သူက သိပ်ကြာတာပဲ.. သီတာဖြင့် နှစ်ခါတောင်ပြီးသွားတယ်.. ဟွန်း” သီတာက ရမက်ရှိန်မပြေသေးဟန်ဖြင့် ခပ်ညုညုလေးပြောသည်။ ” အကို မပြီးသေးဘူး.. ဆက်လိုးအုံးမှာ.. သီတာ အလိုးခံနိုင်သေးတယ်.. မဟုတ်လား ” ” ခံမှာ.. ဘာလို့မခံနိုင်ရမှာလဲ.. ကိုကိုလိုးသမျှ ကျမ ခံမယ်.. ”
” ဟုတ်ပြီ.. ဒါဆို အကို.. ဒီပုံစံအတိုင်းဘဲ ဆက်လိုးမယ် ” စကားပြောနေရင်းက ကိုအေး ကိုယ်လုံးကြီးမှာ တလှုပ်လှုပ်နှင့် ဖြစ်နေရာ သီတာ့ စောက်ပတ်လေးထဲ တဆုံးဝင်နေသော သူ့လီးချောင်းကြီးက တလှုပ်လှုပ်နှင့် သူမ၏ စောက်ပတ်အတွင်းသားနုနုလေးများကို လီးတန်ကြီးဖြင့် ထိုးကလန့်ကာဆွပေးသလိုဖြစ်နေသည်။ ” အင်း.. လုပ်..လုပ်ချင်လေ လုပ်လေ.. ကို ကလဲ.. ” သူမ၏ ဝတ်လစ်စလစ်ကိုယ်လုံးလေးကို မျက်တောင်မခတ် ခဏတာရပ်ကြည့်နေသော ကိုအေးကို သီတာက စိတ်မရှည်သလို ပြောသည်။
သူမ စကားအဆုံးမှာပင် သူ၏ လီးတန်ကြီးကို ဆွဲထုတ်ကာ သီတာ့စောက်ခေါင်းလေးထဲ ဆောင့်လိုးလေသည်။ ကိုအေး၏ အသက်ပြင်းပြင်းရှူသံ၊ သီတာ့ ညီးညူမြည်တမ်းသံများက အခန်းထဲတွင် ပဲ့တင်ထပ်လို့နေသည်။ ထို့အပြင် ဆီးစပ်ချင်းတိုက်မိရာမှ ပေါ်ထွက်လာသော တဖတ်ဖတ်ဆိုသော အသံနှင့် ကိုအေး၏ ဂွေးလဥကြီးများက သီတာ့ဖင်ဆုံကြီးကို ရိုက်မိတဲ့ အသံတဖျတ်ဖျတ်တို့မှာလည်း ဆက်တိုက်ထွက်ပေါ်နေကြသည်။
” ဘွတ်.. ဘွတ်.. ဖတ်.. ပျပ်.. ဘွပ်.. ဘွပ်.. ဘွတ်.. ” ” အားပါး.. ရှီး .. ဆောင့်.. ဆောင့်.. ကျမကို တအားဆောင့်လိုးစမ်းပါရှင် ဟင့်.. ဟင့်.. ဟင့်..ကိုကို့လီးချောင်းကြီး တချောင်းလုံး အဆုံးထိ တချက်ထဲနဲ့ ထိုးစိုက်လိုက်စမ်းပါ.. ခံလို့ကောင်းလွန်းလို့ပါ.. အင့် အား.. ပါး ဟင့်.. ” ” ဘွတ်.. ဘွတ်.. ” ကိုအေးသည် တရှူးရှူးဖြင့် အသက်ရှူတွေ အရမ်းမြန်လာသည်။ ဆောင့်လိုးချက်တွေကလဲ ကြမ်းသထက် ကြမ်း၊ မြန်သထက် မြန်လာတော့သည်။
ကိုအေးတယောက် ပြီးကာနီးလာပြီဆိုသည်ကို သီတာ သိသည်။ သူ ပိုအရသာရှိသွားရအောင် လုပ်ပေးချင်သော သီတာက သူမ၏ ဖင်လုံးလုံးကျစ်ကျစ်လေးကို အသာပတ်ပြီး ကိုအေး၏ ဂွေးအုများကို လက်နဲ့ အသာလှမ်းကိုင်လိုက်ပြီး ဆုပ်နယ်ပေးလိုက်သည်။ ကိုအေးတယောက် အရသာတွေ့သွားတာ သေချာသည်။ အသက်ရှူ ပိုပြန်လာသလို ဆောင့်ချက်တွေကလဲ ပိုအားပြင်းကာ ပိုကြမ်းလာသည်။ ထို့နောက် ကိုအေး၏ လီးကြီး ငေါက်ကနဲ ငေါက်ကနဲ ဖြစ်သွားချိန်မှာပင် သီတာက သူမ၏ စောက်ပတ်လေးကို ညှစ်၍ ပေးလိုက်တော့ရာ ကိုအေး လီးထိပ်မှ သုက်ရည်များ စောက်ခေါင်းလေး ထဲ ပန်းထည့်ခံလိုက်ရတော့သည်။
သီတာ့ စောက်ပတ်ထဲသို့ အရှိန်ပြင်းပြင်းဖြင့် ပူကနဲ နွေးကနဲ သုက်ရည်များ တရကြမ်း ပန်းဝင်လာသည့် ခနမှာပင် သီတာတယောက် သုံးကြိမ်မြောက် ပြီးသွားရတော့သည်။ ” ဟယ်.. ကြည့်ပါအုံး.. ခုနတုန်းက လုပ်ချင်တိုင်းလုပ် ထင်ရာစိုင်းနေပြီး.. အခုကျမှ ဘယ်လိုဖြစ်လို့ ပျော့ခွေနေတာလဲ.. ” အရည်တွေ စိုရွှဲကာ ပျော့ခွေနေသော လီးကြီးကို ပယ်ပယ်နယ်နယ် ဆုပ်ကိုင်ကြည့်ရင်း သီတာက ပြောသည်။
သီတာ့လက်ဖဝါးလေးပေါ်၌ အိပ်ပျော်နေသော မြွေပွေးတကောင်နှယ် စင်းစင်းကြီး ငြိမ်နေသော ကိုအေး၏ လီးကြီးမှာ ခပ်ညိုညိုနှင့် တုတ်ခိုင်လှသည်။ ကိုအေး၏ လီးကြီးကို လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် ဘယ်ညာပြောင်းကစားရင်း တခါတရံ ဂွေးဥကြီးများကိုပါ ဖျစ်ညှစ်ပေးနေသည်။ လမွေးများ ထူပိန်းနေသော ဆီးစပ်မှ ထိုးထွက်လာသော လီးတန်ကြီးသည် ဂွေးစိကြီးအောက်သို့ပင် ရောက်ကာ အမြှောင်းလိုက်ကြီးဖြစ်၍ နေသည်။ သီတာက လီးဒစ်ကြီးကို သူမ၏ လက်ချောင်းလေး၂ချောင်းဖြင့် ညှပ်ကိုင်ကာ ဖြဲချပြီး အနီးကပ်ကြည့်သည်။ ကြီးမားပြောင်တင်းနေသော လီးချောင်းကြီးကို သီတာက ဖောင်းကစ်ဖြူဖွေး သွယ်လျနေသော သူမ၏ လက်ချောင်းလေးများနှင့် အထက်အောက်ဆင့်ကာ လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် ဖွဖွလေးဆုပ်ကိုင်လိုက်ပြီး လီးတန်ကြီးကို ဖြဲချလိုက်သည်။ ထို့နောက် အားမရဟန်ဖြင့် အားပါးတရ ကုန်း စုပ်လိုက်တော့သည်။
ကိုအေးမှာ အတွေ့ထူးကြောင့် ရစ်မူးသွားရသည်။ ဒီလို အရသာမျိုးကို ခံစားချင်တာကြာလှပြီ။ ညိုမီ့ကို ခိုင်းသော်လည်း တခါမှ မမှုတ်ပေးခဲ့။ အခု သီတာနှင့်ကျမှ ကိုအေး ဒီအရသာကို ခံစားရတော့သည်။ ကိုအေးကလည်း သိလိုက်သည်။ အားမရသေးသော သီတာ့ကို နောက်တခါ ထပ်လိုးပေးရပေဦးမည်။ လီးကြီးကို ကုန်းစုပ်နေသော သီတာ၏ ဖင်ဘူးတောင်းထောင်ထားသည့် ဖင်ကြီးကို သူ့ဘက်သို့ ဆွဲလိုက်ပြီး စောက်ဖုတ်ကြီးကို ဖွဖွလေးပွတ်ပေးသည်။ သီတာက တဖြေးဖြေးမာလာပြီဖြစ်သော လီးကြီးကို ပါးစပ်ထဲ ထုတ်ချီသွင်းချီလုပ်သည်။ သူမ၏ လျှာက လီးထိပ်ဖူးကြီးတခုလုံးနှင့် ဒစ်ကြီးကို ကလိပေးနေသည်။ ပါးစပ်လေးထဲမှ ဒစ်ကြီးကို အသာပြန်ထုတ်ပြီး ဒစ်ချိုင့်ထဲသို့ လျှာလေးထိုးသွင်းကာ ရစ်ဝိုက်ကစားသည်။
ထို့ပြင် လီးချောင်းကြီးတခုလုံးကို မဆန့်တဆန့် ငုံကာ ပါးလေးတွေ ချိုင့်သွားအောင် စုပ်ပေးသည်။ ကိုအေး၏ လီးကြီးမှာ အကြောအပြိုင်းပြိုင်းထ၍ မာကျောထောင်မတ်ကာ စံချိန်မှီလာပြီဖြစ်သည်။ ခပ်မော့မော့ကြီး တောင် နေသော လီးတန်ကြီးက မီးချောင်းအလင်းရောင်ဖြင့် တဖျတ်ဖျတ် တောက်ပကာ တံထွေးလေးများဖြင့် စိုစွတ်ပြောင်တင်းနေသည်။ ခဏလောက် ဆက်စုပ်ပေးပြီးတော့မှ သီတာက လီးကြီးကို ပါးစပ်ထဲမှ ထုတ်ကာ မက်မောစွာတချက်ကြည့်ရင်း ငုံ့နမ်းလိုက်ပြန်သည်။
” ကို.. နောက်တခါ လိုးကြရအောင်..နော်.. ” သီတာက မှိုရသူ မျက်နှာမျိုးလေးနှင့် ရွှန်းရွှန်းလဲ့လဲ့လေးပြောလိုက်သည်။ သူမ၏ စောက်ပတ်လေးမှာလည်း ကိုအေးပွတ်ပေး ကလိပေးနေမှုကြောင့် စိုရွှဲကာ ဖောင်းထနေပြီဖြစ်သည်။ ” သီတာ အပေါ်က တက်ဆောင့်ပေးပါလားကွယ် ” သီတာက ကိုအေး အပေါ်သို့ ခွ၍ တက်လိုက်ပြီး လီးတန်ကြီးကို လက်လေးနှစ်ဖက်ဖြင့် စုံကိုင်ကာ ကိုအေး၏ လီးတဲ့တဲ့ပေါ်သို့ စောက်ပတ်အဝကိုတေ့ပြီး ဖြေးဖြေးချင်းထိုင်ချလိုက်သည်။
သီတာက တင်းရင်းပြည့်အင့်စွာ တိုးဝင်နေသော လီးအရသာကို အံလေးကြိတ်ကာ ခံစားရင်း ဂွေးစိနှင့် ဖင်ကြီးထိသည် အထိထိုင်ချလိုက်ရာ ” ဗြစ်.. ပြွတ်.. ဘလွတ်.. ” ” အား.. အ..နာတယ်.. သိလား.. အမေ့.. ” ” ဟင်.. ဘာဖြစ်လို့လဲ သီတာ ” ” အဟင့်.. အရှိန်လွန်ပြီး.. သားအိမ်ကို သွားထာက်မိလို့ပါ.. ” သီတာ၏ ဖင်ကြီးချက်ချင်းပြန်ကြွသွားသည်။ ရှည်လျားသော လီးကြီးက စောက်ခေါင်းနုနုလေးကို မာကြောစွာ ထိုးဆောင့်မိသွားပုံရလေသည်။ သီတာက အပေါ်မှနေ၍ သူမ စိတ်တိုင်းကျ ဖြေးဖြေးတမျိုး မြန်မြန်တဖုံ ဆောင့် ဆောင့်လိုးသည်။
နို့ကြီးနှစ်လုံးက တရမ်းရမ်းဖြစ်နေသည်မို့ ကိုအေးက မက်မောဘွယ်ကောင်းလှသော နို့ကြီးများကို အလွတ်မပေးဘဲ ချေမွဖျစ်ညှစ်ပေးနေသည်။ ” စွတ်.. စွတ်.. ပြွတ်.. ပြွတ်.. စွပ်.. စွပ်.. ” ” ကို ပြန်ကော့ပြီး ဆောင့် ပေးပါလား.. ” ကောင်းလွန်းသဖြင့် ငြိမ်၍ အရသာခံနေသော ကိုအေးက သတိရသွားပြီး သီတာ့ဆောင့်ချက်များနှင့် အညီ သူကလည်း အောက်မှ ကော့ ကော့ပြီး ပင့်ဆောင့်သည်။ ထိုအခါ ဆောင့်အားနှစ်ခု ဆုံပြီး ဆောင့်ချက်က ပြင်းကာ တကိုယ်လုံး တုန်တုန်တက်သွားရသည်အထိ ကောင်းလှသည်။ ထိလှသည်။
သီတာ၏ ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှ သွေးသားများ စုပြုံပေါက်ကွဲသွားသည်။ စောက်ခေါင်းထဲမှ အရည်များက ဒလဟော ပြိုဆင်းလာကြသည်။ စောက်ရေများက ကိုအေး၏ ဆီးခုံပေါ်ရှိ အမွေးမဲများ၌ ရွှဲနစ်နေသည်။ သီတာက ဇွတ်ကနဲ ဇွတ်ကနဲ ထိုင်ချလိုက်တိုင်း လီးကြီးထိပ်ဖျားက အစွမ်းကုန် ဖြဲကားထားသော သူမ၏ စောက်ခေါင်းလေးထဲ တိုး၍ တိုး၍ စောက်စေ့လေးကို ပွတ်ကာ ဝင်သွားသည်။ ” စွပ်.. စွပ်.. ပြွတ်.. ဖွတ်.. ဖွတ်.. ” အပေါ်မှ ဆောင့်နေသော သီတာ၏ ဆောင့်ချက်များက တဖြေးဖြေးနှေးလာပြီး အောက်မှ ပင့်ဆောင့်နေသော ကိုအေး၏ ဆောင့်လိုးချက်များက သွက်လက်မြန်ဆန်လာလေသည်။
” အင့်.. အင့်.. အ အ..မလေး.. ထိတယ်.. ထိတယ်.. ” ထို့နောက်တော့ နှေးနေသော သီတာက အံကြိတ်၍ ခပ်သွက်သွက်မျှ လေးငါးချက်မျှ ဆောင့်ပစ်လိုက်သည်။ ” ပြွတ်.. စွပ်.. စွပ်.. ဒုတ်.. ဖွတ်.. ” ” အင့်.. ဟင့်.. အား.. အား.. အီး.. ” အရုပ်ကြိုးပြတ်ဖြစ်သွားသော သီတာလေး၏ ဖင်သားကြီးများကို လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် ဖျစ်ညှစ်ပြီး ကိုအေးက အောက်မှနေ၍ ဆယ်ချက်လောက် ကော့ပင့်ဆောင့်ပြီး သူမကို ရင်ချင်းအပ်ဆွဲဖက်ကာ သုက်ရည်များ လွှတ်လိုက်ပါတော့သည် ပြီးပါပြီ။
Categorized as အငျးဆကျ Tagged အထာပေးနမှေတော့